atariishada, guitarist, Taylor Swift, lyricist, heesaha
Taylor Alison Swift(* 13 Diisembar 1989) waa fanaan Maraykan ah, heesaha heesaha iyo heesaha heesaha. Waxay ku koray Wyomissing, Pennsylvania, waxayna u guurtay Nashville, Tennessee, halkaasoo ay bilawday mihnadkeeda muusikada oo ah fanaan caan ah. Waxay qandaraas la gashay shirkad madax bannaan oo ah "Big Machine Records" waxayna noqotay qoraaga ugu da'da yar ee abid ugu shaqeeya Sony / ATV Music Publishing. Horeyba kadib markii la sii daayay albumkiisa ugu horeeyayTaylor Swift) ee 2006 ayaa noqday xiddig ka mid ah muusiga dalka. Saddexaad oo kaliya, "Our Song," wuxuu ka dhigay gabayga ugu da'da yar si uu u qoro hees la'aan iyadoon wax caawimo ah lana sii daayay hees la yiraahdo "First Song Songs". Waxaa lagu sharraxay abaalmarinta Grammy ee qaybtaFarshaxanka ugu Fiican(Artist Best Actor) ee 2008.
Albaabka labaadcabsi la'aanla sii daayay dhamaadkii sanadka 2008. Waxaa ku soo laabtay guushii "Love Story" iyo "Waxaad Adigu La Socotaa" jaantusyadan, albumkan wuxuu noqday dad dhagaystayaal ah oo soo jiidasho leh waxana uu noqday albumka ugu wanaagsan ee sanadka ee 2009. Muuqaalkan wuxuu ku guuleystay afar Grammy Awards ee 2010, taasoo Swift ku noqotay guusha ugu yar ee Grammy ee "Album of the Year". Sheekadooda saddexaadHadda hadalayaa la sii daayay dhamaadkii 2010 waxayna iibisay in ka badan hal malyuun oo cutub todobaadkii hore. Swift ayaa markaa ka dib booqasho ku tagtay 13-bilood oo ah socdaalka Dalxiiska ee World Tour, halkaas oo ay ku ciyaartay garoono dhowr ah waxaana soo jiidatay malaayiin taageerayaal ah iyada oo loo marayo 1,6. Midka saddexaad "Mean" ayaa ku guuleystay laba Grammys. Afka afraad ee Taylor Swift ayaa lagu magacaabaaRedwaxaana la soo saaray 22. Oktoobar 2012. Hal mar oo tijaabo ah "Waxaan waligay marnaba la wadaageynin wadajirka" waxay noqdeen markii ugu horreysay ee ay gaarto heerka sare ee saldhiggaboorHot 100. Safarka Waqooyiga Ameerika ee Red Tour wuxuu bilowday March ee 2013. Taylor's ugu dambeeyay ee 1989 ayaa la sii daayay dhamaadkii 2014 iyo heesaha ugu guulaystay ee albumka wuxuu noqday Shake It Off. Waxay sidoo kale ku guuleysatay Grammy ee "Album of the Year" iyo qaybaha "Vocal Best".
Taylor Swift waxaa inta badan lagu tilmaamay "America ayaa gabar" iyo waxa loo yaqaan for songs in inta badan gabyaa oo ku saabsan jacaylka. Musically, sida caadiga ah waa a songs qoraalka fudud melodies eegayey, taas oo ka dhigaysa qof ku dhow isla markiiba geli wacyi (ie. Hook) Sida Xisbi ah waxaa la guddoonsiiyey Nashville dhowna la Association ee ururada iyo hay'adaha dhowna la Hall of Fame. guulaha kale waxaa ka mid Taylor Swift toban Grammy Awards, lix American Music Awards, toddoba Country Music Awards Association, lix Academy of Country Music Awards iyo toban BMI Awards. In ka badan mustaqbalkiisa ciyaareed uu iibiyey in ka badan 22 million albums iyo in ka badan 50 million songs bixi online. Waxa intaa dheer in uu mustaqbalkiisa muusikada, Taylor Swift isku dayay doorka Atariishada muuqday mid dhacdo of CSI Las Vegas ee 2009, in majaajilada ee The St. Valentine (2010) iyo filimka dhaceenLorax The(2012).Forbeswaxay ku qiyaaseysaa inay malaayiin doolar ku kasbatay xirfadeeda iyada oo loo marayo 165. 2013, 40 waxay kasbatay malaayiin doolar (ku dhowaad 789 million crowns), taas oo ugu badnayd warshadaha muusikada.
Taylor Alison Swift wuxuu ku dhashay 13. December 1989 ee Akhriska.Aabaheed, Scott Swift, waa la taliyaha maaliyadeed Merrill Lynch.Wuxuu ku koray Pennsylvania, wuxuuna ka soo farcamay saddexda dhalashadood oo madaxweyne bangi ah.Hooyadeed, Andrea Swift (nee Finlay), waxay ka shaqeysaa guriga waxaana horey u soo shaqeysay maamulaha iibka ee sanduuqa maalgashiga.Waxay ku qaadatay tobankii sano ee ugu horreeyay nolosheedii Singapore, ka dibna qoyskeedii waxay degeen Texas; Aabaheed wuxuu ahaa injineer matoor ah oo ka shaqeeyey Koonfur Bari Asia.Taylor Swift waxaa loo doortay ka dib markii uu heestaa James Taylor; hooyadeed waxay aaminsaneyd inay iyadu ka caawin doonto (Taylor) in la dhiso xirfad ganacsi.Taylor wuxuu yiri, "Mama u maleyneysey in Taylor uu ku ridi doono kaar ganacsi maxaa yeelay mid ka mid ah akhristaha ma ogaan doono haddii ay tahay nin ama naag."Waxa uu leeyahay walaal yar, Austin, oo ka bartay Jaamacadda Notre Dame,laakiin ugu dambeyntii waxaa loo gudbiyey Jaamacadda Vanderbilt.Taylor Swift waxay ku qaadatay carruurnimadeeda geedka geedo yar yar ee gobolka Montgomery waxayna ka soo qaybgashay dugsiga Wyndcroft ee lacagta qaatay.Taylor wuxuu ahaa sagaal sano, qoyskeeduna wuxuu u guuray Wyomissing, Pennsylvania, halkaasoo Taylor uu ka soo qayb galay dugsiga hoose ee West Reading iyo Wyomissing Area Junior / Senior High School.Waxay fasax xagaaga ku qaadatay gurigeeda xagaaga ee Stone Harbor, New Jersey, taas oo sharxaysa iyada oo ah meesha ugu badan ee xusuusta ilmaheeda.
Taylor waa markii ugu horeysay ee uu fardaha fuulo. Hooyadeed waxay ku rideen gabadhii markay ahayd sagaal jir. Kadib waxay ku tartamaysay bandhiga riwaayadda.Qoyskeeda waxay leedahay dhowr kalluumeysi oo American ah iyo aabayaasha Shetland.Da'da sagaal jir, Taylor wuxuu u jeestay falsafadda tiyaatarka muusikada, waxaana lagu qabtay Bandhiga Iskuulka Akademiga Berksdufanka,Annie,Nabad gelyo Birdiesi ay uSound of Music.Waxay si joogto ah u aaday Broadway si ay heeso iyo u dhaqmaan. Laakiin ka dib sanado badan oo dag dag ah New York markii ayan waxba helin, Swift waxay bilowday inay raadiso muusiga dalka.Tan iyo markaas, waxay ku qarash gareeysatay xafladaha xafladaha xafladaha, makhaayadaha, makhaayadaha, tartanka karaoke, naadiyada beerta, indho-indheynta iyo isbitaallada.Kow iyo toban sano kadib isku dayga badanSwift ayaa ku guulaysatay tartankii hibada ee maxaliga ah halkaasoo ay heesay "Song Deal" oo ay sameysay LeAnn Rimes waxayna heshay fursad ah in ay ka dhigto mid ka mid ah Abaalmarinta Charlie Daniels ee Strausstown Amphitheater.Iyadoo ay jirto xiiso sii kordheysa oo ay ka haysato muusikada dalka, sheekadu waxay ka bilowday inay ka soociso asxaabteeda.
Ka dib daawashada dhacdadaQalabka Muusikadaoo ku saabsan Faith Hill, Swift waxay rumaysnaayeen "waxaa jira dal qarsoodi ah oo la yiraahdo Nashville, halkaasoo riyooyin isbeddel ah iyo meesha ay ka baxayso."Waxay u safartay hooyadeed Nashville fasaxii guga, halkaasoo ay ka sameysay demo daboolka Dolly Parton iyo Dixie Chicks hoostiisa oo ay ka buuxaan dabeecada Music Row.Ka dib markii tiro ka mid ah daabacaadayaashu diideen, waxay ogaatay in "qof kasta oo magaalada jooga uu rabay inuu sameeyo waxa aan sameeyay. Sidaas darteed waxaan naftayda u sheegey inaan u baahday inaan ogaado sida ay u kala duwan yihiin. "Waxay bilowday heeso Banner Spangled Banner ku saabsan munaasabado kala duwan oo isboorti ah maxaa yeelay waxay ahayd fursad ay ku tagto 20 000 iyaga oo aan haysan heshiis saxeexa shirkadda duubista.Bilawga ciyaarta Sixers League ee Philadelphia, Taylor oo kow iyo toban jir ah ayaa ku dhuftay jaceylka Jay-Z kadib markii uu heesto heesta.Marka laba iyo toban, dayactiraha kombuyuutarku wuxuu soo bandhigay saddexda guitar guitar waxayna ku dhiirrigelisay inay ku qorto heesta kowaad "Lucky You".Horaantii, waxay ku guuleysatay tartankii gabay gabay gabay gabay oo la yiraahdo "Monster in My Closet", laakiin xilligaasi waxay ka dhigtay inay diiradda saarato heesaha.In 2003 Taylor Swift bilaabay waalidkood si ay ula Tababaraha music Dan Dymtrowem ka New York shaqeeyaan. Iyada oo uu caawimaad ka dhigay daydo advertising for Abercrombie iyo Fitch oo qayb ka ah ololaha "xiddigaha goor wanaagsan", mid ka mid ah iyada song waxaa ka mid ahaa in album duwidda Maybelline Cosmetics oo la kulmay daabacayaasha waaweyn music.Ka dib markii ay heeso heesaheeda asalka ah ee RCA Records, Taylor Swift waxay heshay xirfad horumarin xirfadeed waxaana bilaabay inay si joogto ah u wado Nashville.
Markii Swift uu ahaa afar iyo toban jir, aabaheed wuxuu u guuray Merrill Lynch's Nashville, qoyskiina wuxuu u guuray hareeraha Hendersonville, Tennessee.Swift ayaa ku qeexday mar dambe "qoryo cajiib ah" oo ka yimaada qoyskiisa.Waalidiinteedu waxay doorbideen inay u soo bandhigaan sidii ay ugu guuri lahaayeen bulsho jecel halkii ay fursad u heli lahaayeen Taylor inay noqdaan xiddig.Hooyadeed waxay tiri, "Waxaan marwalba u sheegnay inaanan u sameyneynin lacagta, mana hayno riyo run ah."In Tennessee, Swift waxay tagtay Dugsiga Sare ee Hendersonville, halkaas oo ay ku lahayd bilawgeeda sanadka koowaad iyo labaad.Later, si loo maareeyo jadwalkeeda riwaayadeedka, Swift waxay u wareegtay Haaruun Akademiyada, dugsi khaas ah oo bixiya casharrada guriga. 2008 waxay heshay shahaadada dugsi sare kadib markii ay dhammaystirtay labadii sanno ee ugu dambeysay ee waxbarashadeeda laba iyo toban bilood.
Bilawga Shaqada iyoTaylor Swift(2004-2008)
Afar iyo toban, Swift waxay u guureen Nashville. Iyadoo qayb ka ah heshiiska uu kula joogo Records RCA la kulmay dhowna khibrad Publishing Music Row sida Troy girgirada, Brett Beavers, Brett James, Mac McAnally iyo Brothers Warren The.Ugu dambeyntii, waxay bilawday iskaashi joogto ah oo lala yeeshay Liz Rose.Taylor Swift waxay aragtay Liz Rose inay ka qaybqaato tallaabada RCA waxayna soo jeedisay iskaashigeeda.Waxay bilaabeen inay wada kulmaan galab walba talaadada talaadada ka dib iskuulada.Rose ayaa sheegay in kulannadan ay ahaayeen "qaar ka mid ah kuwa ugu fudud ee aan abid sameeyo. Asal ahaan, waxaan ahaa tifatiraheeda kaliya. Waxay (Taylor) ku qoray wixii ka dhacay dugsiga maalintaas. Waxay lahayd fikrad cad oo ah waxa ay isku dayaysay inay sheegto. Waxay marwalba la timid fikradaha ugu caansan. "Swift ayaa sidoo kale bilaabay diiwaan gelinta demo iyo wax soo saare Nathan Chapman.Ka dib bandhiga barnaamijka Songwriter ee BMI ee The Bitter End, New York,Taylor Swift wuxuu noqday qoraaga ugu da'da yar abid loo ogolaado in lagu aqbalo Sony / ATV Music Publishing.Waxay ka tagtay Diiwaanada RCA da'da shan iyo toban jir ah sababtoo ah shirkaddu waxay rabtay in ay heeso heeso ay heesiyaan sheekooyinka kale, laakiin waxay dareemaysay inay diyaar u tahay in ay xirfadeeda ku bilawdo iyada oo leh alaabkeeda.Waxay sidoo kale joojisay wada-shaqeyntii ay la lahayd Dan Dymtrow, oo ah maamulaha dambe ee xukuma Taylor Swift iyo waalidkeed."Waxaan runtii dareemay gawaaridii tareenka," Swift ayaa dib loo soo celiyay. "Waxaan doonayay inaan galo albumyadan sanado badan markii aan weli qiyaaso waxa aan soo maray."waxqabadka warshadaha ee Nashville ee Bluebird Cafe ee 2005 naftayda Taylor Swift tilmaamay fulinta Dreamworks Records Scott Borchettu, kuwaas oo la isku diyaarineysa in la dhiso calaamad madax banaan, Big Machine Records. Taylor Swift wuxuu noqday mid ka mid ah farshaxannadii ugu horeeyay ee saxiixa qandaraas la leh waraaqda daabacaadda,iyo aabaheed ee ku yaalla aqalka cusub ee daabacaadda ayaa soo iibsaday saddex boqolkiiba saamiga.Si ay u keento dalal muusiko ah, Borchetta Taylor Swift ayaa u diyaarisay muuqaalkeeda xafladaha CMA Music Festival, halkaas oo ay u samaysay bandhig faneed.
Swift ayaa bilaabay inay ka shaqeyneyso sheeyada bilawga ah ee asal-galka ah ka dib markii heshiiska la xiray. Kadib tijaabooyin ay soo saareen wax soo saarka Nashville, mashiin weyn ayaa loo shaqaaleysiiyey inay shaqaaleysiiso soo saaraha hore ee Nathan Chapman. Waxay aheyd markii ugu horeysay ee uu ka dhigo albaabada studio isaga, laakiin Swift ayaa rumaysan in iskaashigooda ay u fiicnaayeen iyaga.Ugu dambeyntiina, Chapman wuxuu soo saaray dhamaan tirooyinka albumada hal heesTaylor Swift. Waxay lafteeda ku sharxay albaabka inay tahay xusuus qor ah bilawgii dhallinyaradeeda.Inta badan lambarada waxaa lagu qoray sanad-kowaad ee dugsiga sare waxaana lagu tilmaamaa waaya-aragnimooyin nololeed cusub oo ah jacaylka koowaad iyo welwelka qaan-gaarnimada.Taylor Swift ayaa sheegay in inkasta oo ay u egtahay "sida wiilasha 500," waxay ku qortay qayb weyn oo heesaha ah sida kormeere.Saddex heeso oo albaab ah ayaa waxaa qoray Swift oo kali ah, oo ay ku jiraan laba qof oo kali ah, iyo siddeedaad iyada oo lala kaashanayo lyricists sida Liz Rose, Robert Ellis Orrall iyo Angelo Petraglia.Gabaygan ayaa si muxaadaro ah loogu qeexay "isku dhaf ah qalab dhaqameedka waddanka iyo geela, gumeysiga qosolka ah."Taylor Swiftayaa la sii daayay bishii Oktoobar ee 2006.The New York Timesayaa ku sharxay albaabkii "asal ah wax yar oo ka mid ah waddanka, labaduba waa mid cajiib ah oo caan ah, oo ay hoggaamiso shirkadda, codka kalsoonida ah ee Swift dhalinyarada."Roger Holland oo ka socda majaladdaPopMatterswuxuu rajeynayaa in Swift uu "awoodi doono in uu helo dheelitirka u dhexeeya dalxiiska qaaska ah iyo dareenka muuqda ee pop"Taylor Swiftwuxuu muujinayaa inuu heysto wax badan oo uu ku soo bandhigo. "Sasha Frere-JonesNew Yorker TheOo isna wuxuu u tilmaamay "baxayo ayaa ah" oo amaanay iyada warheynta in a noocyo muusikada siiyey, sidaas halka goobta Nashville music waa halkii muxaafidka ah, sida laga soo xigtay isaga si, Swift ma ka waaban inaad isticmaasho waxyaalaha aasaaska ah ee R & B, raabka iyo dhagaxii weynaa. Oo weliba dadkii ka fikira style sida dhaqanka Nashville dalka-pop.On goobtaIsbuucle Dalkaayaa saadaaliyay in "walxahan maadada leh ee soo jiidashada ah ay soo jeedinayaan tayada joogtada ah ka dib dugsiga sare." Rolling Stoneby Taylor Swift qoray: "Marka ee 2006 kaliya lix iyo toban, yimid gal goobta music ah iyada album ugu horeeyay, haddana waxaa ka dhawaajisay labada dhallinyarada ah, laakiin labada yaabka baaluq. (...) "Sheekadayadu" waxay jebiyeen dareenka isla jilicsan sida Britney ama Patsy. "
Publishing Big Machine Records weli joogay bilaw, marka ay soo saartay ugu horeysay ee weyn ee hal "Tim McGraw" ee June 2006, sidaas Taylor oo hooyadiis ayaa ka caawiyay kali CD pack baqshado iyo iyaga u soo diri raadiyaha.2006 ayaa badisay sanadka inta badan kobcinta albaabadaTaylor Swifton raadi raadiye, oo markii dambe ka hadlay: "Raadiyaha raadiyaha ee farshaxanka ugu badan ayaa soconaya muddo lix toddobaad ah. Waxay igu qaadatay lix bilood "Sawirro farshaxan oo rinji ah (oo uu soo saaray Jackson Pollock) si ay u siiyaan muusikada muusikada kuwaas oo ay ku jiraan heesaheeda warbaahinta.Waxay soo bandhigtay dhowr jeer bandhigyada TV-ga, sida bandhigga Grand Ole Opry,Good Morning America,si ay uTRL.Waxay ka soo baxday dhowr bandhigyo, kor u qaaday libaaxyada jilicsan waxayna noqdeen wajiga mashruuca Verizon Wireless Wireless Mobile Music.Taylor Swift ayaa nafteeda ku tilmaamay "ilmo internet" sababtoo ah waxay isticmaashay shabakada bulshada ee Myspace si ay u hesho taageerayaasha.Waxay ku qoratay boggeeda gaarka ah, iyaga oo faallo ka bixiyay xaaladda taageerayaasheeda, iyo shakhsiyan waxay ka jawaabtay dhamaan wararka ay taageerayaasheeda u dirtay.Waqtigaas wuxuu ahaa mujrimiin muusig ah.Borchetta sheegay in saaxiibadii kiciyey sunnayaasha ay la yaab leh markii uu go'aansaday inuu heshiis la ahaa lix iyo toban heesaa, laakiin Taylor Swift ka dhacay meel bannaan oo lacag la'aan ah suuqa: gabdhood oo qaangaadh ah kuwa dhageysta dalka music.Kadib keli ah, "Tim McGraw," waxaa jiray afar kale oo la sii daayay oo u dhexeeya 2007 iyo 2008: "Teardrops on My Guitar", "Our Song", "Picture to Burn" iyo "Waa inaan Lahaa Maya". Dhammaantood waxay ku guuleysteen Billboard Hot Country Songs, "Our Song" iyo "Waa inaan Sumay Maya" ayaa lafilay. Tv-ga Taylor Swift wuxuu u mahad-naqay heesaha "Song", Taylor Swift wuxuu noqday ciyaaryahankii ugu da'da yaraa, oo kaliya oo u tagay dhinaca sare ee shaxda dalka iyada oo aan cidna ka caawinin."Teardrops on My Guitar" ayaa noqday mid aad u yar oo pop ah oo gaadhay kaalinta saddexaad ee saldhiggaboorHot 100.Albaabada loo iibiyay 39 000 toddobaadkii ugu horreeyayiyo bishii Maarso ee sannadka 2011 ayaa ka iibisay 5.5 malaayiin qaybood oo dunida oo dhan ah.Swift ayaa sidoo kale sii daayay albaabka kirismaska,Muuqaal Xilliyeed: Ururinta Ciidda Taylor Swiftbishii Oktoobar ee 2007 iyo EPIndhaha qurxoonbishii July 2008.
Taageerada albumkeeda ugu horeysay, Taylor Swift wuxuu sameeyay wax badan; marka laga reebo bandhigyada iyo bandhigyada masraxa, waxay ku ciyaartay dhowr fannaan oo riwaayado ah oo dhowr farshaxan oo dalka ah. Dhamaadkii sanadka 2006 furay riwaayada for Rascal Flatts on sagaalkii Me & My Gang Tour kulan ee ugu danbeysay, bedelida předzpěváka hore Eric Church, oo la eryay.Swift ayaa markii dambe u dirtay kiniisigeeda rikoodhkii ugu horreeyay oo leh: "Waad ku mahadsan tahay inaad ku ciyaareyso waqti aad u dheer oo aad u sareeya ee kuxiga safarada. Si daacad ah ayaan uga mahadcelinayaa, Taylor. "2007 ayaa soo bandhigay labaatan bandhig oo ku saabsan safarka George Strait,bandhigyo dhowr ah oo ka socda Kenny Chesney's Flip-Flop Summer Tour,ka soo muuqday muuqaalka Brad Paisley ee Bonfires & Amplifiers Touriyo dhowr riwaayado ah oo ku saabsan Soul2Soul II Tour oo la wadaag Tim McGraw iyo Faith Hill.2008 Swift waxay mar kale ku ciyaartay marxaladda Rascal Flatts.Taylor Swift ayaa sidoo kale heeso ka qaaday Beyoncé, Rihanna, John Wait, Lynyrd Skynyrd iyo Eminem.Ka hor iyo ka dib riwaayad kasta, waxay qabatay ilaa afar saacadood oo ay ku jiraan taageerayaal.
2007 Swift ayaa kula guuleystay Alan Jackson oo ah Artist of the Year of Nashville Songwriters Association. Taylor Swift wuxuu noqday fanaankii ugu da'da yaraa ee abid soo martay.Waxa kale oo ay ku guulaysatay Abaalmarinta Horizon ee ugu wanaagsan ee loo yaqaan 'National Country Music Association' ee sahaminta cusub ee muusikada.2008, akadeemiyadda muusikada ee dalka ayaa magaceeda ugu yeedhay heesaha ugu wanaagsan dhalinyaradaoo ku guuleystay abaalmarinta fanaankii ugu caansanaa dalka Mareykanka ee Abaalmarinta Muusikada.Heesaha lagu soo bandhigay albumkaTaylor Swiftayaa ku guuleystay toddoba abaalmarin oo ah BMI.2008, Taylor Swift ayaa sidoo kale loo sharaxay abaalmarinta "Best Artist Grammy", laakiin ugu dambeyntii waxaa lagu waayay Amy Winehouse.
2008 - 2010:Cabsi la'aan,Khilaafaadka VMA, Grammy fiasco
In November 2008 sii daayay iyada album studio labaad, cabsi la'aan. On album ayay qoray toddoba songs oo keliya, oo ay ku jiraan laba kali iyo haray lix songs qoray laxamiistaha ugu Liz Ros, John Rich, Collbie Caillat iyo Hillary Lindsey. Waxay iskaashi la samaysay soo saaraha Nathan Chapman oo ku yaal albaabka. cajalado muusig waxaa lagu gartaa sida The New York Times ka qoray "gitaarka cod weyn rafcaanka, choruses + Liverpool, violin marmar iyo Banjo ka Faydatay Dhudhumadeeda ee isku dhafka ah." "Swift waa mid ka mid ah composers ugu caansan iyo wakiilada ee hormuudka ka ah dalka. Waxay leedahay xiriir dheeraad ah iyada nolosha hoose ka badan dadka waaweyn inta badan. "Rolling Stone waxa lagu tilmaamay" uu aqoonyahan ka kooban, iyadoo hadiyad ah dhalin, waayo, aayadda dhismaha, chorus iyo buundada. Her songs shakhsiyeed iyo spinline macno ahaan u ekaan sidii out-of-qorka gabar předměstkého ee. "
Isagoo kaashanaya Robert Allem, wuxuu taageersan yahay albumka Fearless badan marka la sii daayo. Hal dhacdo ka mid ah show Ellen DeGeneres wuxuu ahaa bandhigga. Waxay sidoo kale u muuqatay wada hadalo kale oo badan. Wuxuu la xiriiraa taageerayaasha isagoo isticmaalaya cajaladaha video-ga iyo Twitter. Midda koowaad ee albaabka "Love Stores" ayaa la sii daayay Sebtembar 2008 iyo sanado kadibna waxa uu noqday fanaankii ugu fiicnaa ee wadanka oo dhan. Waxay ugu sarreysa u ahayd 4 on Billboard Hot 100. Sanadkan 2008 iyo 2009 ayaa sii daayay afar kaligood oo kale: "White Horse", "Waxaad Addeecsan tahay", "Fifteen" iyo "Cabsi la'aan". "Adiga oo iga ilaasho" ayaa ahaa midka ugu wanaagsan ee la duubay oo ay ugu sarreyso 2 on Billboard Hot 100. Muuqaalkii ayaa ka soo baxay qaybta sare ee Billboard 200 Jaartarka 592 nuqullada 304 8,6 toddobaadkii ugu horreeyay, tan iyo markaas, adduunka ayaa iibisay 2009 hal milyan oo nuqul. Albaanku wuxuu noqday kan ugu wanaagsan ee sanadka ee XNUMX wuxuuna noqday Swift guul weyn oo caalami ah.
Taageerida albaabka Fearless, Swift waxay samaysay safarkeedii ugu horeeyay. Turki cabsi leh ayaa lahaa waxqabadka 105. 90 waxay muujinaysaa Waqooyiga Ameerika, 6 ee Yurub, 8 ee Australia iyo hal Asiya. Wakhti hal mar ah, John Mayer, Fait Hill ama Katty Perry. Waxay horey u ahaayeen: Justin Bieber, Kelli Pichler iyo Gloriana. Tour ayaa booqday malaayiin taageerayaal ah iyada oo la adeegsanayo 1,1 waxayna ku kasbatay malaayiin dollar iyada oo loo marayo 65. Filimka Taylor Swift: Safarka Fearless waa telefishan waxaana la sii daayay DVD iyo Blu-ray. Keith Urban's Travel Tour wuxuu u shaqeynayay sidii horey u socotay. Waxay ku guulaysatay abaalmarino badan, tusaale ahaan: CMT Giants ayaa ku sameeyay sheeko u gaar ah "Drive" by Alan Jackson, at 51. Grammy Awards ayaa ka dhex muuqday Miley Cyrus iyo Fifteen, waxayna ku dhejisey xabsi kufsi leh T-Pain at SFI Awards. Waxay kaloo diiwaan gelisay mashaariic dhowr ah. 2009 ayaa sii waday version-ka gaarka ah ee Tom Petty's "American Girl". Iyada oo codka la socdo waxay ka dhex muuqataa John Mayer oo ah hal qeyb ka mid ah Qalbigayga, taas oo ah midka ugu guuleystay afkiisa afraad. Iyadoo Martin Johnson iyo Robert Eliss Orrael, ay ka wada shaqeysay laba heesood oo "Waxaad Marwalba Lahaa Gurigaaga" iyo "Crazier" oo loogu talagalay Hannah Montana: Soundtrack Movie. K filmu Na sv. Maalinta Jacaylka ayaa ku heesay heeso: "Maanta wuxuu ahaa Fairytale. Barnaamijka Hope ee heesaha heesaha wuxuu ku qoray heeska "Neefsasho la'aan" by Better Than Ezra.
Waxay noqday artist ugu horeeyay ee dalka inuu ku guuleysto ah MTV Music Awards, marka heesta "Waxaad ii sugnaan Iyada oo" ku guuleystay video fiican ee dumar ah ee sannadka 2009. hadalka Her aqbalo, laakiin kala gooyey by Kanye West, kuwaas oo ladafayo makarafoonka iyada gacanta ka oo wuxuu ku yidhi: ". Beoyncé ayaa video ugu fiican" Swift ayaa taageere of music West iyo ku sheegay shir jaraa'id in "maya dareen xun isaga ka gees ah." Dhacdadan ayaa helay dareenka warbaahinta badan waxayna ka buuxiyeen wareegyada internetka oo badan. Maalmo yar gudahood ayaa ku sheegtay wareysi: "West waxay i siisay raalligelin aan aqbalo. Wuxuu ahaa mid aad u kali yeela. "In wareysiyo xiga, diiday inuu ka hadlo dhacdada, sababta oo ah, taas oo iyadu ma ay rabaan in ay sameeyaan" kiiska weyn ". "Waxay ku dhacday TV-ga si qof walba uu u arko waxa dhacay. Ma jiraan wax in laga hadlo ka. "Dhacdada iyo warbaahinta xiga dareenka The si weyn kor u mustaqbalkiisa muusikada.
In 2010 4 guuleystay Grammy 8 ka mid ah tirada guud ee magacaabidda. Albaabka Fearless wuxuu noqday Albaabka Sanadka iyo Abaalmarinta Dalka ee ugu Fiican. Heesta "White Horse" ku guuleystay Best Country Song iyo Best Female Vocal Performance. Waxay noqotay fanaankii ugu da'da yaraa ee abid ugu guuleysta abaalmarinta Album of the Year. Intii lagu guda jiray xaflada gabyeen iyagoo ay weheliyaan Stevie address song "Rhiannon" iyo "Waxaad iga." Her waxqabadka vocal heshay reviews xun oo keentay iska caabin ah warbaahinta ballaaran. Her hees ayaa lagu tilmaamay in kala duwan sida "la yaab leh u xun" iyo "aad, aad u liita." Inkasta oo New York Times ka qoray, "waxaa dhiig cusub in la arko qof si tayo leh wax flub." Iyo "Waxa ay ahayd xiddiga pop ugu muhiimsan ee cusub ee sannadihii la soo dhaafay." Falanqeeye The music Bob Lefsetz saadaaliyay in mustaqbalkiisa uu yahay in ka badan, "habeen". Sidoo kale si cad u codsaday aabbeheed si isaga loo soo kiraystay "wakiilka Crisis advertising" si ay u maareeyaan amarkooda sababtoo ah wariye Stevie Nick Fanaanada ayaa qirtay "Taylor aad u yar oo doqonimo ah waa in ay fahmaan qalad aad u dhigay.": "Taylor i soo xusuusinaya shaqasiyadeyda in go'aanka iyada oo dabeecad caruureed. Waa wax aan waxba galabsan oo ka dhigaysa wax qariib ah oo naadir ah. Gabar Tani waxa qoray wargayska heesaha sida Neil Diamond ama Elton John, taas oo ka dhigaysa dunida oo dhan ugu gabya. dhagaxayga weyn Female 'n' oo duudduuban - dalka - Xisbi pop ayaa ku soo laabtay, oo magaceeda waa Taylor Swift. Waxaa jira dumar la mid ah kuwa doonaya in ay badbaadiyaan warshadaha muusikada. "
Cabsi la'aan ayaa ku guuleysatey abaalmarino kale oo badan, waxayna noqotay taariikhda ugu qaalisan taariikhda. Waxay noqotay haweenka ugu da'da yar oo kaliya 6 inay ku guuleystaan ​​Abaalmarinta Sannad-ka ee laga soo bilaabo Koorsada Muusikada. Cabsi la'aan ayaa sidoo kale ku guulaysatay abaalmarinta "Best Album Award" ee Ururka. Swift wuxuu noqday fanaankii ugu da'da yaraa ee ku guuleysta "Album of the Year" ee Akadeemiyada Dalalka Dalka. Abaalmarinta Muusikada Mareykanka ayaa abaalmarinaheeda ugu fiican ku abaalmarisay waxayna ku magacawday "Artist of the Year". Waxaa lagu abaalmariyay Hal Garaad Starlight Songwritter Hall of Flame, iyo Ururka Nshville Songwritter Association oo loo yaqaan 'Composer' iyo 'Artist of the Year'. Billboard ayaa ku abaalmariyay sanadka 2009 waxaana lagu daray liiska 100 ee liiska ugu saameynta 2010.
2010 - 2012:Hadda hadaliyo safar caalami ah
Bishii Oktoobar 2010 waxay sii daysay albaabkeeda saddexaad ee loo yaqaan 'Studio Now'. All afar iyo toban songs ayay qoray iyo gacan saar on qoraalana la soo saare muddo dheer Nathan Chapman. Musically, album sii ballaarato ka baxsan dalka-pop, mararka qaarkood faragalin dhagaxa wasakh iyo pop. The New York Times ayaa ku tilmaamay album sida duurjoogta ah, musically kala duwan oo "aad u weyn, waxaa laga yaabaa in ugu fiican." Magazine Rolling Stone tilmaamay Swift sida mid ka mid ah dhowna ugu fiican pop, Dhagax, ama waa dalka, "Swift laga yaabaa in xirfadle Nashville xariif yaa garanaya oo dhan tricks ka soo saarka hits, laakiin sidoo kale gabar jaceyl xasaasiyad. "
Iyadoo Hadalka Hadalkan, waxay ku guuleeysatay olole ballaaran oo dhiirrigelin ah. Waxay u muuqday oo ku saabsan bandhigyada kala duwan aroor iyo shows hadal, iyo sidoo kale mini-riwaayada free meelo aan caadi ahayn, sida. In bas ah double-dabaq ah u furan on Hollywood Boulevard ama in Saaladda tagay garoonka JFK ee. Ka sokow Kris Kristofferson, Emmylou Harris, Vince Gill iyo Lionel Richie uu ku lug lahaa Club Los Angeles ee Nokia on the "jiido gitaarka" - fannaaniin qaaday markooda masraxa iyo ciyaaray versions loomana baahno of songs ay lacag loogu ururinayey dadka Music DALKA Hall of Fame.
Waxa kaliya ee ugu horeysay ka album ah "Mine" ayaa la sii daayay bishii August 2010 oo kali iyo aad u badan ka badan shan sano 2010 iyo 2011 waa: "Back to December," "Mean," "The Story of Us", "Sparks Fly" iyo "Dirraa". album waxa uu ahaa a guusha ganacsi weyn, debuting on top of 200 shaxda US boor. iibka Bilowga ahaayeen koobi 1 047 000, oo wuxuu ka dhigay album lix taariikhda Mareykanka, oo iibiyey in ka badan hal milyan oo nuqul ka mid ah toddobaadkii. In albums 2012 February dunida oo dhan iibiyey dib 5,7 million koobi.
sano 2011 iyo bilowgii sanadka 2012 u safray on safar for album ah. Qayb ka mid ah saddex iyo toban bilood ahaayeen: qaab safar dunida 111. data 7 ee Asia, Europe 12, 80 in 12 North America iyo Australia. Waxay ogaa fannaaniin badan oo ku soo biiray beydkiisa kaliya inta lagu guda jiro safarka North American. Waxay soo shaqeeyay James Taylor, Jason Mraz, Shawn Colvin, Johnny Rzezniakem, Andy Grammez, Tal Bachman, Justin Biebrich, Selena Gomez, Nicki Minaj, Nelly, Bob, Usher, Flo Rida, TI, John Foreman, Jim Adkins, Hayley Williams, Hot qabow Rae, Ronnie Dunn, Darris Rucker, Tim McGraw iyo Kenny Chesney. Inta lagu jiro safar ah North American-qabadka kasta qoray qoraalo kala duwan oo ka mid ah heesaha ay uu gacanta bidix, qoraalka waa in loo arkaa sida giraan ah niyadda nocturnal. Inta lagu jiro safar ah, ayay ciyaaray versions badan loomana baahno of songs iyo magaalo kasta ku aamaanay iyadii sida fanaaniinta gudaha. Waxa uu xaqiijiyay in version of song loo oggol yahay inay lama filaan ah in předsavení ah haddii kale si fiican u la akhrin. safar waxaa ka soo qeyb ka badan 1,6 million taageerayaasha iyo kasbatay ka badan 123 million dollars. In November 2011 vadáno ahayd iyada album ugu horeeyay ee ku nool, la hadal Haddaba World Tour Live halkaas oo qaab 17 ka North America.
54. Abaalmarinta Grammy, heesta "Mean" ayaa ku guuleystay Abaalmarinta Heerka Qaranka ee ugu Fiicneyd iyo Horumarka Sare ee Dalka. Intii lagu guda jiray xaflada abaalmarinta, sheekadani waxay sidoo kale ciyaartay. Waxaa loo yaqaan 'Year of Enterer of the Year' ee ka timid Aqoonyahanka Muusikada Dalka ee 2011 iyo 2012, iyo Ka Qayb-Qaadinta Musharaxa Dalka ee 2011. 2011 wuxuu ahaa Artist of the Year at Abaalmarinta Music Music iyo album waxaa loo magacaabay Best Country Album. Billboar waxay magaceeda 2011 u magacawday Haweenkii Sanadka.
Intii ay xornimadeedii afaraad ku dhameysatay 2012 xagaaga, James Taylor ayaa ku martiqaaday martiqaad rasmi ah intii uu socday Tanglewood. Wadajir waxay wada ciyaarayeen heesaha "Dabka iyo Roobka" Love Story "iyo" Our Ours ". James Taylor, oo markii ugu horreysay la kulantay markii ay siddeed iyo toban jir ahayd, waxay tidhi: "Waxaan ku soo dhacnay muusikada. Waxaan jeclaa heesaheeda iyo joogitaanka joogtada marxalad aad u weyn. "
Muddadani waxay qaybisay laba heeso oo asal ah oo leh codka Ciyaaraha Gaajada. "Safe & Sound" ayaa ku qoray oo la duubay iyada oo lala kaashanayo "Civil Wars Wars iyo T-Bone Burnett". Hal ayaa la sii daayay January 2013 waxana uu tan iyo markii uu ka iibiyay 1,4 hal milyan oo nuqul oo Maraykanka ah. Sheekada waxaa lagu abaalmariyay Abaalmarinta Heerka Sare ee Muuqaalka Muuqaalka ee Grammy Award ee 2013 waxaana lagu magacaabo Song Original Best by 70. Golden Globes Kaalkeedii labaad ee muuqaalka "Indes Open" waxaa si gaar ah loogu qoray Swift oo waxaa soo saaray Nathan Chapman. Waxay sidoo kale bilawday inay heesto sheeko "Both of Us". soo saaraha ayaa sii daayay sheeko ku saabsan BoB ee labaad ee loo yaqaan 'Strane Cllouds'.
2012-2014Rediyo dhibaateyn ay gilgileyaal
Albaabka afraad ee afarta 'Red' waxaa la sii daayay bishii Oktoobar 2012. Waxay lafteeda sheekada 9 ka soocday heesaha 16 ee albaabka. Waayo haray toddoba songs uu la soo shaqeeyay Max Martin, Liz Rose, Dan Wilsnem, Ed Sheeran iyo Gary Lightbodym. Nathan Chapman shaqeeyay sida soo saare sare on album ah, laakiin wax soo saarka ee shaqsi tareenka ayaa sidoo kale ku lug Jeff Blasher, Butch Walker, Jacknife Lee, Dan Huff iyo Shellback. Chapman ayaa sheegay in uu ku dhiirri-galiyay in ay is-casilaan oo ay iskudaydaan xaalado kale. Musically, album la tijaabiyay qalbi dhagaxa, dubstep iyo qoob ka pop waa sypanéb dheeraad ah u dhexeeya, laakiin si ka badan waxaad ka Garataa style Swift. John Caramica o Red ayaa qoray: "In yar oo faahfaahsan oo ka sii dhakhso badan sidii caadiga ahayd. Maqaalku wuxuu joojiyaa inuu iska dhigo wax kasta oo aan ahayn muraayad fagaare ah iyo wuxuu ku midoobayaa cabsida dadka waaweyn. Rolling Stones magazine xusay: "Inta badan, ayay u suurtagashay in ay soo galaan xeerkii khariidaynta emociálnho hagar sida Joni Mitchell iyo Carole King ... sabe sahaminta mashruuc waa mid ka mid ah sheekooyinka ugu fiican ee Pop."
Sida xilli Red 72 ahaayeen wakiillo ka idaacadaha adduunka oo u duulay Nashville, halkaas oo lagu jiro toddobaadka hore ee iibka sameeyey wareysiyo gaar ah oo leh Swift. Waxay u muuqatay in dad badan oo shows hadal TV iyo sameeyaa abaalmarinta xaflad music ee US, UK, Germany, France, Spain iyo Australia. song ugu weyn ee heestii "Waxaan Ma Marna Ever Helitaanka Back Wadajir" noqday tirada ugu horeysay 1 on the US boor Hot 100. Waxa kale oo ay ahayd soo saaray songs kale 6: "bilow Mar kale" (raadiyaha dalka), "Waan ogaa in aad ahaydeen Dhibaato" "22" "Wax walba ayaa isbedelay" "Markii ugu danbeysay" (oo dhan, waayo, radio pop) iyo "Red! (raadiyaha dalka). Albaabada guduudan ayaa lagu soo bandhigay dusha sare ee Billboard 200, iyo hal milyan oo nuqul ah 1,21 todobaadka furitaanka. Tani waxa ay calaamad u iibka furitaanka ugu weyn ee in ka badan 10 sano, Swift noqotay gabadhii ugu horeysay ee ay leeyihiin laba albums la furo iibka toddobaadkii ka badan 1 million koobi. 2013 bishii May, hal malyan oo nuqul ah ayaa lagu iibiyey aduunka oo dhan 6. In 2012 November wuxuu ka iibiyey intii uu kubada cagta 26 million albums oo uu leeyahay 75 million songs dijital ah lagala soo bixi.
safar Red ee North America lahaa marka la eego 66 13 ay ka mid yihiin garoomada iyo show ka March 2013 orday - 2013 laga shido. Tour booqatay garoomada December 2013 agagaarka New Zealand iyo Australia ee February 2014 England iyo Germany, safar ku dhamaatay iyadoo lix taariikhaha Aasiya. qaab Qaar ka mid ah marti gaar ah sida Carly Simon, Tegan iyo Sara, Jennifa Lopez, Luke Bryan, Patrick ku mooday ee dhaca Out Boy, Ellie Goulding, Nelly, Lara Bareilly, Cher Lloyd, Bob, Gary Lightbody, tareenka, iyakana Geedaha, Rascal Flatts iyo Hunter Hayes. Waxay iskaashi la samaysay tiro fannaaniin ah intii lagu jiray xilligii. Wada jir ah ula Jack Antonoff qoray heesta "macaan yihiin Fiction" for soundtrack si movie One Fursada ah. Sheekada ayaa ku guuleysatey in loo magacaabo "Best Original Song" ee 71. Globes Golden. At CMA Awards 2013 ku sameeyaa version ah loomana baahno of heesta "Red" la Vince Gill iyo Alison Kraus. In Chicago, ayay sameeyaa la Stones Rolling ayaa, dib ayaa sheegay in mid ka mid ah daqiiqado ugu fiican ee iyada mustaqbalkiisa muusikada ahaa.
Album Red wuxuu ku guuleystay Grammy balse waxaa lagu magacaabay afar qaybood. Heesta "Waxaan Ma Marna Ever Helitaanka Back Wadajir" ayaa loo magacaabay in 2013 for record ee sanadka iyo album ah 2014 sannadka ee Album of the Year. Sidoo kale, looma helin abaalmarin kasta oo loo yaqaan 'Country Music Association'. Si kastaba ha ahaatee, Taylor Swift jiray 22 kaliya loo dhigay a Pinnacle Award gaar ah lagu gaarayo "u gaar ah" oo ka qayb qaateen in dalka music dunida oo dhan. Waagii hore, kaliya Grath Brook ayaa helay abaalmarintan. Her abaalmarinta uu soo bandhigay Tim McGraw, Faith Hill, Keith Urban, Rascal Flatts, George Strait iyo Brad Paisley, Mick Jagger, Cary Simon, Julia Roberts, Reese Whitherspoon, Ethel Kennedy iyo Justin Timberlake. The New York Times tixgeliyo abaalmarinta aad u ilaaliso Taylor Swift ee ku sifayn ah "shakhsiyadda of music dalka, ay engine hal abuur leh, safiirkeeda dunida ballaaran." Ayuu yiri New Yorker, "tani waxaa laga yaabaa in la joogo marka Swift siiyey sagootin ah u sifayn in ka caawiyey iyada si toos ah saldanad reer pop. "in 2012 badisay seddex MTV Europe Music Awards, oo ay ku jiraan abaalmarinta for Best Female iyo Xeerka live Best. Heesta "Waan ogaa in aad ahaydeen Dhibaato" ku guuleystay abaalmarinta for Best Female Video. At American Music Awards 2012 ku guuleystay abaalmarinta for Fanaanada dalka ugu fiican iyo in abaalmarinta 2013 for artist ee sannadka.
In Era Red, nolosheeda jacaylku waxay noqotay mawduuc aad u fara badan oo ah warbaahinta. Village ayaa qoray: "Waxay waa yar yahay, in la kontroverně kartaa riwaayado, nafteeda siinayo xarunta of sheekooyinka iyada iyo, dabcan, in uu la dad badan oo caan ah in muddo gaaban of time, laakiinse ciduna ma of this waa mid aad u dhif ah." Ugu xafladda Golden fijaan, majaajilaystayaasha Tina Fey iyo Amy Poehler candhuuf ku tufay iyada nolosha jacaylka iyo lagula talinayaa in ay ka fogaadaan ragga dhallinyarada maqlayo iska. Marka profile waxba tarayn Fair ayaa markii dambe waxaa la weydiiyay in uu muujiyo dhacdo this: "Waan u jeclaa, aad u ogaato, sida aan kaftan nafteeda. Laakiin haddii aad rabto in qaar ka mid ah dajinta weyn, tan iyo 2010 aan dadka la kaliya labo tegey "Inkasta oo ay kala hadlayaan Swift tacliiq approvingly xigtay Madeline Albright:". In Jahannamo waa meel gaar ah oo loogu tala galay dumarka kuwaas oo aan caawiyo haweenka kale "
Wax yar ka dib muuqaalkeedii hore ee The Rolling Stones horraantii Juun, 2013 wuxuu sii daayay Taylor Swift markii ay bilawday inay ka shaqeyso shanteeda gabdhaheeda shanaad. "Horeyba waa bilowday, sida dareen aan macquul ahayn, iyo marka uu bilaabo, waxaa badanaa raacaya qulqulka. Waxaan jeclaan lahaa inaan qoro laba sano ka hor intaanan dhameeystirin albaabbada cusub, "CIA Music Fest ee Nashville ayaa shaaca ka qaaday wareysi ay ku yeelatay wargeyska hoose ee hiannon.Tan iyo markaas, iyadu waxay xajisay dhammaan faahfaahinta qarsoodiga ah ilaa ay ugu dambeyntii la wadaagto hagayaal yar oo shabakadaha bulshada ah bishii Agoosto, ka dibna waxay ku dhawaaqday taariikhda iyo waqtiga dabbaasha ee laga helo Yahoo - 18. Agoosto.
13. Bishii Agoosto, Swift ayaa muuqaalka TV-ga Jimmy Fallon ku soo bandhigtay oo uu ku ciyaaray muuqaalkiisaEw!, halkaasoo ay ku ciyaaraysay qashinka Natalie; wareysi xiiso leh, Fallon wuxuu isku dayay inuu u sheego Taylor Swift woxoogaa macluumaad ah oo ku saabsan akhbaarta Yahoo.Laba maalmood ka dib, filimka filimka sayniska ee filimka ayaa soo galay filimadaDeeqaha(The Giver) by Phillip Noyce, halkaas oo Swift ay dooratay Rosemary.16. August, oo ay la socdaan Jaime King biiray waxa loogu yeero. "Ice baaldi Challenge", wicitaanada Internet, taas oo u adeegta sida ururinta ah ee cilmi-baarista ku saabsan daaweynta cudurka ALS. Qofka la yiraahdo wuxuu qabtaa hawsha baaldinta biyaha barafka, isaga oo u sii daaya isla markaana wadaagaya shabakada shabakadaha bulshada, isaga oo bixinaya boqol doolar si uu ugu bixiyo Ururka Maraykanka si uu ula dagaalamo cudurkan. Tiro badan oo tartan ah, oo ay ku jiraan Taylor Swift iyo Jaime King, ayaa labadaba samayn doona, degdegaya oo wax ku biirinaya.
On 18. 2014 ayaa ku dhawaaqday Taylor Swift mareegta Yahoo Live Stream, oo ka soo baxday dhinaca sare ee dhismaha New York State State Building, faahfaahinta albaabka soo socda1989, kaas oo soo baxaya 27. Oktoobar 2014. Waxay sidoo kale sii daatay albaabada koowaad ee albaabka loo yaqaan "Shake It Off". Sida laga soo xigtay ereyadeeda, albaabka pop 80 waxa loo waxyooday albaabka. sano, isla markaa waa albaabka koowaad ee si rasmi ah loogu dhawaaqo pop.Axadda 24. Bishii Agoosto, heesaa hees markii ugu horeysay wuxuu ku noolyahay inta lagu guda jiro MTV Video Music Awards 2014."Shake It Off" ayaa markii ugu horeysay lagu soo bandhigay Billboard Hot 100 iyo 4. Jagada Jaamicadaha UK Singles.Si buuxda habeenbarka on 14. Oktoobarayaa shaaca ka qaaday mid kale oo ah heeso cusub oo loogu magac daray "Out of Woods".
Mid ka mid ah xusuus horrayn muusikada Taylor Swift heeso kiniisadda, ayeeydeed hooyada, Marjorie Finlay (dhashay Moehlenkamp). Dhallinyaradeeda, Finlay wuxuu ahaa telefishanka Puerto Rice oo ciyaaraha ka ciyaara ee Thailand iyo Singapore. Sida ilmo aad u yar la Taylor ayaa jeclaa soundtracks filimada Disney: "Waalidkay ayaa ogaaday in sida ugu dhakhsaha badan erayada yimid, waxaan rabay in la abuuro aniga ii gaar ah." Potzději waalidkeed soo bandhigay fanaaniinta sida James Taylor, Simon & Garfunkel iyo Deff Leppard. Waxay aad ugu mahadcelineysaa kalsoonideeda hooyadeed, oo ka caawisay sidii ay u diyaarin lahayd fasalka fasalka. Oo hooyadiis ayaa sidoo kale sabab ah iyada "jiidashada of qoraal iyo sheeko." Swift jeclaa akhrinta iyo qorista gabayga, iyo gaar ahaan shaqo oo gooni loo sooco Shel Silverstein iyo Dr. Seuss. Buugeeda ugu caansan waa To Toos iyo Mockinbird.
Waxaa lagu soo bandhigay muusikada wadaniga ah "gabdhaha farshaxanka ah ee 90.let" sida Shania, Faith, Dixie Chicks. Taylor wuxuu keenaa codka iyo heesaha muusiga dalka. Saamaynta ugu weyn ee muusiga ku leh shaqadeeda waxaa tarjumay Shania Twain. Her hannaankii carruurnimada sinnaba Hill isku dayeen in ay nuqul "Wax walba oo aan sameeyey ama ayaa sheegay in uu ahaa gudaha." Dadka iska caabin ah maxfalka dabeecad Dixie chicks iyo schopnst ciyaari Gurtida adiga kuu gaar ah. gabaygooda "Cowboy waxay iga qaadaan meeshi" marka hore waxay bartay gumaadka.
Ka dib markii ay ogaadeen music začacla fanaaniinta dalka ka weyn sida Patsy Cline, Loretta Lynn, Wynette iyo Dolly Fammy Parton.Věřila in Paron "tusaale ahaan la yaab leh, waayo, dhammaan composers haweenka." Dadka saameynta dalka kale ee dhaqanka waxaa ka mid ah Miranda Lambert, Dwight Yoakam, George Strait, Garth Brooks, Kenny Chesney, Rebac McEntire, Alan Jackson, Martina McBridge, LeAnn Rimes, Tim McGraw, Brad Paisley, Ryan Adams, Patty Griffin, Lori McKenna iyo Bon Iver.
Waxaa sidoo kale saameyn ku yeeshay farshaxanno kale oo ka baxsan dabiicada dalka. Dhallinyaro waxay jeceshahay Hanson iyo Britney Spears. Xitaa xitaa maalmahan waxa uu leeyahay "u hoggaansamida" ee Spears. Sanad dugsiyeedkeeda dugsiga sare waxay dhageysatay kooxo ay ka mid yihiin "Confashboard Confessional", "Fall Out Boy, All-American Rejects and Jimmy Eat World". Waxa kale oo uu ahaa taageere ee dhowna dumar ah oo casri ah sida Ingrid Clarkson, Michelle Branch, Pink, Alanis Morissette, Ashlee Simpson, Kelly Clarkson, Tefe Dolson iyo Avril Lavigne.
Taylor ayaa sidoo kale si dhow u daawaday heesaha muusikada ee OC iyo Chirurgové, iyadoo hees kasta oo la soo duubay ka dibna guriga. Waxa uu yahay taageere wayn oo hip hop ah: "Nolosha hab waa wax ay wadajir u tahay waddanka iyo hip hop." Dhiirrigelinta ayaa ka soo baxda liiska fanaaniinta rookariska. Stevie Nicks wuxuu u sharraxayaa sida "geesinimada igu sinaayo siyaabo badan". Waxa uu ku nuuxnuuxsaday farshaxanno ka soo jeeda 60. Tusaale ahaan: Shirelles, Doris Troy iyo Boy Beach.
Sida lagu daydo iyada mustaqbalkiisa sida Paul McCartney, Bruce Springsteen, Emylou Harris, Kris Kristonfferson iyo Carly Simon. "Waxaan booday at fursad, laakiin weli waa fanaaniinta isku dhan mustaqbalkooda." McCartney sida xubin ka mid ah Beatles iyo artist Solo samaynaya on aragti Swift "sida haddii uu kelyaha iyo qalbigaba ayaa sii raagayaan ... muusikiiste kasta ku riyoon karaa oo keliya marka la tixraacayo sida . this "waxa uu jecel yahay Springsteen," ayuu sidaas musically waa isku mid, waayo, sidaas dheer "Markii music Swift koraa oo doonaya in ay helaan mid ah sida Harris,". ma ahan oo ku saabsan warkiisii, laakiin ku saabsan music ah "ku saabsan Krisoffersonovi ayaa sheegay," waxa kaliya mid ka mid ah. kuwa dadka ku jira beerta this dhowr sano, laakiin ma dhihi karo in ay tahay ka, kuwaas oo beryihii hore ee. "Swift ayaa caan ku ah oo xasaasi ah, laakiin aad u xoog badan qof.
Mawduucyada iyo qaababka liiriga
The Guardian-ka inta lagu guda jiro labada albums ugu horeysay, ayaa sheegay: ". Theme waa in si fantastik ah u wanaagsan marka la eego nolosha teenage la midab Walbahaar nostalgic iyo style" New York Magazine xusay: "kuwii gabayaaga yar soo qoray si cad wax lagu qoro ah gaaraan. Brian Wilson, oo ah qoraaga kaliya ee da 'yarta ah oo kaliya ayaa ka hor intaanay iman. Waxay sidoo kale la barbar dhigtay Janis Ian.
In ay album labaadcabsi la'aansawirada sheekooyinka quruxda badan. Waxay bartay xiriirka u dhexeeya xaqiiqda (jacaylka) iyo sheeko jilicsan (jacayl). "Saddexaad, afraad iyo shanaadba waa kuwo ku saabsan xiriirka dadka waaweyn. Intaa waxaa dheer in heshiiska hindiga iyo jacaylka qaar ka mid ah iyada songs on waalidka - xiriirka ilmaha ( "The Day Best", "Marna Grow Up", "Ronan"), saaxiibtinimada ( "Shan iyo toban", "Neefta", "22"), diidniintayda ( "The ka baxsan "," Place a In Adduunka, "," micnaha "), iyo hamiga xirfadiisa (" Change "," Long Live. "" Mid ka mid ah Lucky The ")" Si wadajir ah la Smile xidhan ".
New Yorker sheegay of iyada songs "waa deganayn, waxay leeyihiin koobaa gaar ah ... songs caadifad waxaa soo noolaaday naxdin ku xiga." Suuliyada xusay in dhismaha songs Swift waa "Convention pop awood ay gacanta ku effortless. composers dhowr dhisi karaan buundooyinka ka fiican yahay, iyadu waa "The magazine Rolling Stones ku tilmaamay in ay" ardayba, oo gabayaa-Xisbi ah, ayaa hadiyad la dhalin dhismaha aayaddan-chorus-buundada "The Guardian-ka ku qoray:".. wakhti badan ku qaataa dhunkashada roobka, waa mucjiso waxay leeyihiin in ay ku abuurta kabaha nepomokavé. "Journal of Songwritter American ah Swift sharaxayaa sida" laxamiistaha weyn qoray aragti la ekaan iyo ku dhawaad ​​adaanaha ... xataa iyada wax ugu da'da weyn waxaa lagu gartaa in ay maskax leh, ayaa doorasho saxda ah ee erayada leh qaab-dhismeedka nunu ula kac ah. Raadi kaliya mijana caajis ama habayn isug. "
Shaqadiisa wuxuu isticmaalaa faahfaahinta noloshiisa. Marka dhagaysiga muusigga, sidii ilmo, iyadu dareemay qasnaa, ". In Persica d'raison ee Miss Swift la saxo qaladaad" ". Ma garan karo marka ay wax ka dhacaya nolosha shakhsiga ah ee gabayaaga ahaa oo iyana shuqulkii ma wax looga qabto in ay music" New York Times ayaa aaminsan In uu heeso badanaa waxay la macaamilaan jacaylka qarsoodiga ah ee sanad dugsiyeedka sare iyo, ugu dambeyntii, laakiin ugu yaraan, asxaabtooda gaarka ah. John Mayer waxaa loo maleynayaa in uu tixraacayo heesta "Gacaliye Yooxanaa". Sheekadani waxa ay ahayd sharaf. Village Voice ayaa ku tilmaamay arrin ku dhacday iyadoo shaqada "ee song sheegayaa waxa uu leeyahay maskaxda ku, waa sida isagoo professor ah, aamadani, iyo this hanjabo aqoonsiga saxda ah ee iyada talanti, taas oo aan confessionalism, laakiin riwaayadaha." Warbaahinta Qaar badan ayaa aaminsan in warbaahinta gacanta ay go'aansashada isticmaalka faahfaahinta autobiographka waa curyaanimada maxaa yeelay ma waydiisan waayadii hore. Fanaanku wuxuu sheegay in dhammaan heesaha aysan aheyn mid dhab ah oo inta badan ku saleysan aragti. Marka lagu daro fartooda, waxay isku dayaan in aysan ka hadlin maadooyinka ama dadka heesaha ah, sababtoo ah waxay yihiin dad dhab ah: "Waxaad isku daydaa inaad isdifaacto adigoon qofna ku dhicin."
Hees iyo muusikada
Muusigeeda waxaa ka mid ah waxyaabaha asaasiga ah, waddanka, waddanka iyo pop-rock. Lagu sharxay sida fanaaniinta dalka, waxay ka wareegaysaa 1989 saafi ah ilaa pop saf ah. Laakiin mustaqbalka Swif waxay dooneysaa in ay qoro albaab kale oo dalka ah.
Group Rolling Stones ayaa sheegay "ciyaari karo saldhigga dal, laakiin waa mid ka mid ah xiddigaha dhagax weyn dhab ah dhowr aannu maalmahan helay." The qoraalada New York Times, "ka Miss Swift ma aha badan oo music in la tixgelin karo waayo, dalka, mararka qaarkood u ciyaara la Banjo, masraxa mararka qaarkooda xirtaa kabaha Romney ayaa gitaarka a sitaa, laakiin waxaa jira wax in waxa Nashville jiidashada unikátní- iyo přednes.Swift aad u nugul waxaa loo arkaa a-dalka pop-dhaqameedka oo kaliya sababtoo ah waxa uu ku qoray sheeko ku heeso leh muuqaal melodic iyo qaab muuqaal ah, sidaas darteed waa waajib in Nashville. "
Qeexitaankiisa gaarka ah ee muusiga waddanka "dhab ahaantii waa mid sahlan. waa marka qof uu ka sheekeysto noloshooda ku saabsan sida ay ugu koray beertiisa, wuxuu ku dhacay jacayl iyo carruurtiisuna waxay ku koraan beer isku mid ah. Dadka qaarkood, marka ay murugeysan yihiin, u hees sida ay u cabaan khamriga. Waxaan qoraa heeso aanan ku iman karin mabda'a xiriirka iyo sida jacaylka jacaylka u qabo. "
Codkeeda waxaa lagu sharraxay "macaan" laakiin nuugan. Waxay saameyn ku yeelatay maaskaro madaama mabaadii'da ay noqotey fanaani, hoos u dhac ku yimaada habka caadiga ah ee xariiqda gabadhaadu ay isku deyeyso inay si adag u hadlaan. Ereyga codkeeda ayaa horey loo yiqiin oo aan wareersaneyn, hase yeeshee way isbeddeshay, hadda waxay u muuqataa mid kacsan, badanaaba waxay u muuqataa inay isku xirnaanta dadka u horseedaya madmadow. Waxay bartay ereyada ay macnaheedu tahay.
Dhawaaqa noolaanshaha ayaa ugu fiican, laakiin maaha ilaa iyo inta uu ka yahay Christina Aguilera ama Carrie Underwood. Heesaheeda nool waxay ku tilmaamtay xishood, khafiif ah iyo mararka qaarkood xishood. Si kastaba ha noqotee, Swift waxay heshay ammaan ah inay diidaan codka si toos ah.
Swift waa halkii lagu gartaa sida laxamiistaha ah, "waxaan ku qori songs iyo codkayga si fudud waa hab ay u muujiyaan ugu horayn oo dhan." Her Tababaraha Scott Borchetta qirtay in isagu ma aha gabayaa ugu fiican farsamo. Bandhiga heesaheeda waa wax la sameeyo iyada, iyada oo ay samaynayso shaqo badan oo lagu hagaajinayo. 2010 waxaa lagu dhawaaqay in ay sii wadi doonto inay heestaan ​​saacadaha heesaha.
Swift ayaa dareensan in ay kudhacdo kaliya waxqabadka "haddii aysan hubin waxa ay dhagaystayaashu u maleynayaan iyada, sida abaalmarinta."
Ku dhawaad ​​had iyo jeer mar walba xidho casaan.
nin weyn loola hami kuwaas oo u barwaaqoobi yaabaa eegin xirfadooda. Vogue Magazine in iyada shakhsiyadda tilmaamay "smart iyo funny iyo mararka qaarkood darana sinaysta." Grantland iyada tilmaamay "sucker" iyo "si cad u nervous si aad u arag in marwooyin ah dalka sida Faith Hill ama Carie Underwood ah. Character ekaan Diane Keaton comedy jaceyl Annie Hall ayaa diyaar u ah xilligan kasta oo aad u xiiseynayey in ay ka farxiyaan, neerfaha, sidoo kale nooca, tabar buuxda.
Taageerada 1989, Swift wuxuu bilaabay isticmaalka shabakadaha bulshada si toos ah ula xiriiro taageerayaasha, wuxuuna ku casuumay taageerayaasha 100 inay muujiyaan muuqaalka Shake It Off video. Si deg deg ah ayuu u diraa hadiyadaha kirismaska ​​taageerayaasha, waxaanay ku martiqaadeen guriga, halkaas oo ay wada joogeen wakhtigii. Waxay sheegtay in ay leedahay "xiriirka ugu dheer iyo kan ugu wanaagsan ee ay marwalba haysatay" taageerayaasheeda, waxayna aad u badan tahay iyaga oo jooga munaasabadda abaalmarinta. Waxaa la ogyahay inay inta badan heleyso taageerayaasha shabakadda bulshada. Isaga iyo taageerayaashiisa waxay inta badan ku xiran yihiin shabakadaha bulshada ee Instagram iyo inta badan Tumblr - xataa inta lagu jiro xafladda abaalmarinta.
In sannadaha hore ee mustaqbalkiisa ciyaareed la soo wareegtay muuqaalka Swift, taas oo ka koobnayd dhar xagaaga iyo kabaha Romney. Habkani qaab-dhaqameedkan waxaa koobiyeeyay taageerayaal dhalinyaro ah oo ka qeyb galaya riwaayadeeda. ". Sparkly, dharka beaded" At dhacdo gala waxa uu noqday yaqaan ee Her timo si dabiici ahaa taageerayaasha napodobovám kuweyga iyo Swift ayaa yiri: "Waxaan xusuustaa sida aan barbareeyay timaha, sababtoo ah waxaan doonayay inaan ku noqdo sidii qof kasta oo kale oo haatan timaha oo dhan this tuso.Tasu. Waa xiiso leh. "In magazine 2011 ku Vogue codsaday in ay ka gooyay garaacaa ii on bogga hore ee wargayska. 2014, waxay gaabisay timaheeda, maantana waxay xajisaa timo toosan. 2011, Vogue waxaa lagu magacaabay "Style Style". Waxaa loo magacaabay naag dhar ah oo loogu talagalay 2014.
Saameyn iyo aqoonsi
Shaqadeeda waxaa lagu ammaanay farshaxan qibrad leh. Bill Toers ayaa leh, "Waxay caqli tahay, sida gabayga qoraaga, waan kuxiran karaa murugadeeda. Waxay u qalantaa wixii ay qabatay oo dhan. "Neil Young wuxuu ku sharraxayaa sida" muusig weyn ":" Waxaan jeclahay Taylor Swift. Waan jeclahay in aan dhagaysto. Waxaan jeclahay in aan daawado sida ay uga jawaabayso dhammaan weerarrada. Waxaan jecelahay hab aan ku qeexo naftayda. "Stephen Skills wuxuu u doodayaa qaabkiisa qoraalka:" Taasi waa waxa aad sameyso markaad tahay qoraa heesaha ... waxaad ku xirtaa wadnahaaga gacantaada kadibna qor. "
James Taylor, kaasoo laba jeer ciyaaray Swift ayaa sheegay, ". Waxaan kaliya in ay isha ku dhacay, iyada oo ay joogaan masraxa waa weyn" Elvis Costello ayaa yiri: "Waxaan qabaa inay tahay arrin xiiso leh. Waxaad ka arki kartaa iyada in shahaado qaar ka mid ah is-xakamaynta iyo in aan horana. "Judy Collins tilmaamay in Swift oo tusaale u ah xiddigaha casriga ah, taas oo sii line ka mid ah fannaaniinta si madaxbanaan doonayay.
Marka la eego Swift Kristoffenon, waxay tiri: "Waxaan si weyn u yaabay. Aniga ahaan, waa wax cajiib ah sida qof da 'yar uu u qoro heeso badan. In kasta oo isku xigta uu leeyahay mustaqbalkiisa ciyaareed cajiib ah. "Janis Ian ayaa sheegay in" Swift bedelay gabdhaha wajihi gabayadii music skládánáním iyo gitaarka ciyaaro ... waxaa jira xaqiiq this. "Address ayaa aaminsan in Swift," ayuu qoray wargayska heesaha sida Neil Diamon iyo Elton John, taas oo ka dhigaysa oo dhan aduunka oo heesaya. "
John Bon Jovi wuxuu u sharraxaa sida "xal dhab ah oo ku wajahan dhinac kasta, qaabka iyo foomka. Iyadu waa a Xisbi, heesaa iyo gabar qurux badan "Parton ee" mid aad u soo jiitay Swift, gaar ahaan ay songwriting ... Waxaan runtii soo jiitay hlobkom songs ay, wuxuu leeyahay sifooyin in qaadan doontaa waqti dheer "Etheridge leeyahay,".. Ruuxeedii, iyada geesinimada waan jeclahay. Waxaan u maleynayaa in uu la yaabi doono dadka waxayna joogi doonaan muddo dheer. "
Swift ayaa sidoo kale lagu ammaanay gabayada casriga ah ee casriga ah. Taageere ah iyada mustaqbalkiisa hore waxa uu ahaa John Mayer: "aad u guurto laga yaabaa in waqti ay ku Zaman music kasta oo iyadu lahaa weli la garaaco." Mahad ayaa sidoo kale ku guuleystay ammaantiisa ka Drake, Tegan iyo Sara, Grimes, Kesha, Katy Perry, Kelly Clarkson iyo Lady Gaga.
Ryan Adams ayaa ku tilmaamay mid ka mid ah "qorayaasha ugu quruxda badan ee aan abid arko. Waxaan la fadhiistay iyada oo qolka dhexdeeda waxaan maqlay sheekada ay ku qortay goobta oo ay ahayd mid cajiib ah. Waxay ahayd aalado saafi ah. "Kathleen Hanna waa gebi ahaanba Taylor Swift. Waxaan qabaa inay tahay lyrics super smart, oo waan ku faraxsanahay in uu qoray oo uu music u gaar ah. "Shirley Manson ku yidhi," Waa mimořídně tayo at qoraal songs ... uu qaatay albaabka u gaar ah oo u tegey si toos ah u dhex. Waa inaan ku cambaareynaa miisaaniyad-qaadista. Taasi waxa ay fanaaniinta ayaa la rejeynayaa in uu sameeyo. "Xiddiga Lena Duhman of HBO ku Girls taxane telefishan, ku tilmaamay Swift sida" farshaxanka saaxiibkiisa naftayda. "
Taageerida albaabbadeedii ugu horeysay, waxay u muuqatay inay tusaale u tahay jinsiyada iyo wejiga mashruuca 'Mobile Verizon Wireless' Mobile Music. Wakhtiga aan la filayn, waxay bilawday waxyaabo kala duwan oo ah dharka xagaaga ee Wal - Mart waxaana ay u samaysay jasiiradaha Pacific iyo caruusadaha. Waxay taageertay kooxda Nashville Predators waxayna wajahaya Sony Cyber ​​- kamaradaha casriga ah. Waxay cayaartay ciyaarta video in Band Hero. Xilligii Hadalka Sheekada waxay sii daaysay daabacaad gaar ah oo albaabkeeda ah iyada oo loo marayo Target. Waxay noqotay wajiga CoverGirl oo sii daayay dhirta Elizabeth Arden, Wonderstruck iyo Wonderstruck Enchanted.
Taageerada aflaanta afraad ee Red, Swift waxay soo bandhigtay album gaar ah oo leh Target, Papa John's Pizza iyo Walgreens. Waxay noqotey Cake Coke Cuntada iyo Kediska Sneakers. Waxa ay sii daysay fiyuuskeeda saddexaad, Elizabeth Arden, oo Taylor u yaqaan Taylor Swift. Waxay sii waday inay la shaqeyso Sony Electroncs iyo American Greeting. Inta lagu jiro safar ah Red la shaqeeyaa shirkado badan sida Air Asia iyo Qantas, taas oo u adeegi jireen sida airline rasmiga ah ee safar Australia iyo Asian Casio ah, halka Cornetto lugta Asian ah safar ku maalgaliyo. Albaabka 1989 waxaa lagu taageeray Subway, Keds. Bartilmaameedka Coke. 2014 waxay sii daysay Qaxoontiga afaraad ee Waxyaabaha aan Dhamaadka ahayn.
Swift ayaa markii ugu horeysay ka soo qeybgashay 2009 dhacdada dembiga ee Las Las Vegas, oo ah gabar dhallinyaro ah oo dhalatay kacaan. New York Times ayaa xusay in dabeecada ay tahay "Swift" in ay ahaato "wax yar oo la yaab leh oo la aqbalo." Sannadki sannadkii, Swift ayaa martigelisay oo u qabatay munaasabad muusik ah habeenkii Sabtida Night Live Live. Entertaiment Weekly ayaa lagu sharraxay "SNL xilli-ciyaareedkan waa marti ugu fiicnayd" ayaa lagu cadeeyay inuu yahay "kufilan karti badan oo door ah."
Filimkii ugu horeeyay ee Swift ee filimka wuxuu ahaa filim " Maalinta Jacaylka. Riwaayad, halkaas oo ay ku ciyaaraysay saaxib saaxiib ah oo ka mid ah ciyaaraha fudud ee dugsiga. Print qiimeeyaa iyada waxqabadka guud ahaan togan, The Los Angeles Times: "ka iman kara maadda run", San Francisco Chronicle: "aad u funny" Time "halkii cute," Daily News ". Xanuujin sirgaxan" In 2012, Swift wuxuu Aundrey sameeyay filimka filimka 'Lorax'. 2013 waxay ku samaysay muuqaal gaaban oo ah majaajilada cusub ee Gabadha. 2014 ayaa door weyn ka ciyaaray filimka Doner.
dadaalka qabeen Swift ayaa loo aqoonsan yahay abaalmarinta oo ka tirsan ururka Ma wax, Siinta Back Fund iyo Tennessee Services Masiibooyinka. In 2012 Michelle Obama bandhigay Swift la Big Help Abaalmarinta Award for iyada "go'antahay caawinta dadka kale" iyo "insirovat shuqulka kuwa kale". Isla sanadkaas, Kerry Kennedy, Robert F. Kennedy Center for Justice iyo Human Rights, bandhigay Swift la udhaqaajiyaa ee Hope Award for iyada "go'an tahay in ay gacan ka ugu da 'yar ... Taylor waa nooc ka mid ah qof dumar kuwaas oo jeclaan lahaa in aan gabdhaha."
Swift waa taageeraha waxbarashada farshaxanka. 2010 waxay ku deeqday 75 000 $ nashville dugsi Hendersonville si loo caawiyo dib u habeynta nalalka iyo qalabka maqalka ee qolka dugsiga. 2012, 4 ayaa ballanqaaday malaayiin doolar si loogu maal galiyo dhismaha xarun waxbarasho oo cusub oo lagu magacaabo National Music Hall of Fame iyo matxafka Nashville. Dhisida 7 500 m2waxaa lagu furay 2014 waxayna taageeri doontaa barnaamijyo cusub iyo siminaaro loogu talagalay dhalinyarada iyo waayeelka. Aaggu wuxuu ka kooban yahay seddex fasal iyo goobo bandhig iyo dhismooyin waxqabadyo iskudhaf ah sida carruurta xayawaanka iyo fasalka halkaas oo lagu dhejin karo joornaalo iyo mashruucyo farshaxan oo kale. Mas'uuliyiin matxid ah oo xaruntooda ku magacaabay Taylor Swift Training Center iyo fanaaniinta ayaa ku lug leh golaha. In 2012 Swift, wuxuu la shaqeeyaa Dugsiga Chegg ee Buugaagta wuxuuna ku deeqay 60 000 $ music for 6 musharaxiinta Maraykanka. 2013 Swift waxay ku deeqday 100 000 $ sumcada nashville.
Swift kor u qorista carruurta. In 2009 250 000 uu ugu deeqay $ dugsiyada kala duwan ee guud ahaan dalka, kuwaas oo sidoo kale ka qeyb galay ama nimy lahaa cilaaqaadka kale. Lacagta waxaa loo isticmaali jiray si aad u iibsato buugaagta, barnaamijyo waxbarasho oo maal iyo caawiyey mushaaraadka macallimiinta. In 2010 ku sameeyaa warbaahinta nool, kaas oo lagu baaro oo kaliya dugsiyada xilli Maraykanka si ay ugu dabaal Scholastic Read Maalin Walba. In 2011 6 000 Swift deeqay buugaagta Maktabadda Dadweynaha Library Reading in Pennsylvania. In buugaagta 2012 14 000 deeqay maktabadda Maktabadda Dadweynaha Nashville ee Tennessee. buugaagta ugu badan waxaa loo kala saaraa galay wareegga, inta kale waxaa loogu talagalay carruurta ka dakhligoodu hooseeyo qoysaska, barbaarinta iyo xannaanada carruurta. In 2012 ayaa wada shir guddoomiyey ololaha Guud America iyo dhiiri caruurta inay wax akhriyaan. In 2012 Swift kor loogu akhriyey webcast live "awoodda akhriska" labaad si toos ah baahin fasalka ee Maraykanka. In buugaagta 2013 2 000 ugu deeqay iyada oo loo marayo hindisaha ee Barnaamijka Reach Out on xirfadaha akhris-qoraalka hore Hospital Reading Caafimaadka Carruurta Center.V sano 2014 muuqday xilli RED oo ka qeyb galay webcast kale Scholastic, huleeshay galay fasalada oo dalka Mareykanka ah. In 2014 uu ka soo baxa oo dhan ka heesta "Welcome to New York" dugsiyada dadweynaha City New York deeqay.
Intii lagu jiray xirfadiisii, Swift ayaa ku deeqay lacag si ay u caawiso dhibanayaasha musiibooyinka dabiiciga ah. In 2008, soo baxa ka iibinta alaabta on Country Music Festival in Red kříže.Později fund musiibo sanadkan uu ugu deeqay, ugu deeqay $ 100 000 Laanqeyrta Cas si ay u caawiyaan dhibbanayaasha daad sannaddii Iowa 2008. 2009 waxay taageertay Rafcaankii Fiktooriya markii ay ku soo biirtay riwaayad ku taal Concert Sydney Relief. Lacagta maaliyadeed waxaa loo maleynayaa in ay tahay tan ugu sarreysa ee farshaxan kasta oo lagu deeqay Ururka Laanqayrta Cas ee Australiya. 2012 waxay ka qaybgashay rajada Haiti Telethon, halkaas oo ay ka hadleyso inay ka jawaabto wicitaanada telefoonada daawadayaasha doonaya inay ku deeqaan lacag. Swift ayaa sidoo kale ku duubtay heeso ku saabsan Hope ee Haiti. Iyada oo laga jawaabayo 2010 bishii May ee Tennessee, 500 000 $ ayaa la bixiyay intii lagu jiray wareysiga telefoonka ee WSMV. Kadib 2010, 100 000 waxaa lagu deeqay Hendersonville, taas oo ay waxyeelaysay biyo daad. In dhammaan deeqay dakhliga 2011 750 000 of $ riwaayad la soo dhaafay la hadal Haddaba, dhibbanayaasha duufaanada ee dhawaan ka dhacay dalka Mareykanka. $ 250000 deeqay hay'ad samafal, alabamského Tababaraha kooxda kubada cagta address Kids si ay u caawiyaan kabo dhaawac ah způspbené duufaanno.
Swift soo horjeedo takoorka ka dhanka ah LGBT. Ka dib dilkii Larry King in 2008 diiwaan PSA network waxbarasho ee dagaalka ka dhanka ah dambiyada nacaybka. At-guuradii koowaad ee dhimashada Larry Kig Swift ayuu u sheegay majaladda Todoba, waalidkeed baray "marnaba xukumi dadka kale waxa ay jecel yihiin, waxa jinsiyad ama waxa ay diinta." In 2011 video music for song ah "Dhigan" daacad kula macaamilooteen xoogsheegashada ee dugsiga sare dugsiyada. video ayaa waxaa markii dambe u sharaxan abaalmarinta MTV VMA ee hawlaha bulshada. The New York Times ka qoray in uu rumeysan yahay Swift, taas oo ah qayb ka mid ah "mawjad cusub oo haween dhalinyaro ah, oo bixinaya dhawaaqa cusub ee jiilka mid ah taageerayaasha gay inuu kala xukurno aqoonsiga waqti ka mid ah fariimaha wareer dhaqanka ee maanta."
Fannaanku wuxuu la shaqeeyaa hay'ado samafal oo bixiya adeegyo carruurta jiran. 2008 waxay ku deeqday Chevy pick-up-ka soo jiidashada Gang Camp Gang, gaari loo isticmaalo in ay carruurta ka soo qaadaan garoonka garoonka ilaa xeryaha. In 2011 Swift deeqay, sida guusha ah Entertainer sannadka ka Academy of Country Music, 25 000 dollar Hospital St. Cilmi-baarista Jude ee Tennessee. Qaddarkan waxaa dib loo habeeyay Akademiyada. 2012 waxay ka qaybqaadatay Istaandarka ilaa Upward to Cancer, halkaasoo ay ku samaysay heesaha "Ronan" oo ah xusuusta wiil afar jir ah oo u dhintay kansar. Gabaygan ayaa markaa la duubay kadibna dhammaan lacagihii ay ku bixiyeen waxaa lagu deeqay ururada samafalka ee la xiriira kansarka. In 2014 100 000 uu ugu deeqay dollars Foundation for Research Cancer iyo dollars 50 000 Isbitaalka Carruurta ee Philadelphia. Swift waxay la kulmaan taageerayaal jiran oo badan oo leh Hay'ada Samaynta-Dhaqanka. Waxa kale oo uu sameeyaa booqashooyin gaar ah, tusaale ahaan, Isbitaalka St. Anigoo Yuudas ah carruurta Research, Medical Center Reed Army, Ronald McDonald House, xarun caafimaad oo geedaha kedarka ah - Siinay iyo Isbitaalka Carruurta - Medical Center iyo Isbitaalka Carruurta ee Vanderbitt.
Swift wuxuu ku dhiirri-galiyaa dadka dhalinta yar in ay ku tabarucaan bulshadooda maxaliga ah iyagoo qayb ka ah Maalinta Dhalinyarada Adduunka. 2007 waxay bilowday olole lagu badbaadinayo carruurta khatarta internetka iyadoo lala kaashanayo Taliyayaasha Booliska ee Tennessee. 2007 waxay taageertey ololaha Allstate oo kor u qaadaya wadista gaarsiinta dhalinyarada. 2010 waxay ku samaysay ololaha Got Milk? Waxyaabo badan ayaa loo bixiyay sadaqo badan, sida ururka AIDS-ka ee Elton John, Habitat for Humanity, MusiCares, iyo Quudinta Maraykanka. Waxay sidoo kale ka samaysay xaflado badan oo faa'iido leh.
Waalidiinteeda, Swift waxay iibsatay guri ku yaal Belle Meade, Tennessee. Walaalkeeda yaryar, Austin, waa arday ka tirsan Jaamacadda Notre Dame oo ka shaqeysa masraxa dugsiga. Bishii Diseembar, 2014 waxaa laga helay kansarka hooyadeed.
Degaanka ugu weyn ee Swift waa hudheelka ku yaala Tribeca, New York. Wuxuu waqtikiisa ku qaataa qol saddex-qol oo ku yaal Beverly Hills, California, iyo barxad ku taal Nashville. Sidoo kale wuxuu leeyahay guriga siddeed qol oo ku yaala xeebta Rhode Island.
Sida laga soo xigtay liiska Celebrity 100 soo saaray sannadkii May majalada Forbes si dag dag 2009 uu kasbaday $ 18 million in 2010 $ 45 million in 2011 $ 45 million in 2012 $ 57 million in 2013 $ 55 million oo sannadda $ 2014 64 million.
Swift ayaa la socday muyuusig Joe Jonas laga soo bilaabo Julaay ilaa Oktoobar 2008, actor Taylor Lautner laga bilaabo Oktoobar illaa December 2009. Muwaadin ahaan waxaa lala xiriiriyaa muyuusig John Mayer dhamaadkii 2009 ilaa bilowgii 2010. Waxay ku biirtay jilaaga Jak Gyllenhall laga soo bilaabo Oktoobar ilaa Disember 2010, ka dib markii ay kala qaybsadeen bilihii Janaayo iyo Febraayo 2011. Laga soo bilaabo Julaay ilaa Sebtembar 2012 ayaa la wareegay dhaxalka siyaasadeed ee Connor Kennedy, tan iyo bishii Oktoobar ilaa Janaayo 2013 waxay u baxday heesaha Harry Styles.
In 2013 iyo 2014 Swift ma qof tago, xiganaya diidan inay ka qabtaan dareenka warbaahinta dheeraad ah. "Waxaan dareemayaa in haddii aan maskaxdayda jacayl furay, ma wanaagsan noqon lahaa mustaqbalkeyga muusikada." Waxaa si weyn loo soo sheegay in Swift bilaabay shukaansi laxamiistaha iyo music saare Calvin Harris ka 6. March 2015.
Inta lagu guda jiro ololaha madaxweynennimo ee 2008, Swift taageeray kasta oo olole dacwadood Haweenay loogu talagalay ka qayb qaadashada haweenka ee geeddi-socodka siyaasadda oo ahaa mid ka mid ah xiddigaha badan oo duubay fariin dadweynaha xilli Waayo Your Country. Waxay tiri, "Uma maleynayo in shaqadayda ay tahay in ay isku daydo in ay saameyn ku yeelato dadka sida ay u codeynayaan." Ka dib markii la furay[Ilaha]Madaxweyne Obama ayaa u sheegay Rolling Stone in ay taageertay madaxweynaha: "Weligay ma arkin dalkan si aad ah ugu faraxsan go'aanka siyaasadeed. Aad ayaan ugu faraxsanahay tani waa doorashadii ugu horeysay. "
In 2010 ah madaxweynihii hore ee Maraykanka George HW Bush ka qeyb galay gaar ah television in Kennebunkport, Maine, halkaas oo ay ku sameeyaa oo Swift ah. Swift ka dib tilmaamay "unspoiled" iyo aad u fiican. In 2012 ahaa Swift abaal Choice Kids ee aqoonsiga shaqada hay'ad samafal oo ka gacmaha Michelle Obama, kuwaas oo ku tilmaamay sida qof "u kacay inuu sare ee warshadaha music ah, laakiin weli dhulka ku soo degay, qof ayaa dhaafo oo dhan laga filayo, taas oo 22letý gaari karo. "marwada koowaad ka dib tilmaamay Swift sida" xidhiidhsanyihiin ". In 2012 Swift wareysi uu sheegay in inkasta oo aniga qudhaydu isku dayaya in ay sii "an aqoon iyo wargeliyo sida ugu macquulsan," sidaa odhan "oo ku saabsan siyaasadda, maxaa yeelay waxa ay saamayn ku yeelan kara dadka." Waxay ka hadlay xiisaha uu taariikhda American iyo buugaagta akhriska ah oo ku saabsan Ibraahim Lincoln, John Adams, Aabbayaashow Aasaasid iyo Ellis Island. Swift waqti qaar ka mid ah qoyska iyo Kennedy ka hadlay jaceylka uu u Ethel Kennedy.
Abaalmarin iyo sharaf
Swift ayaa helay abaalmarinta iyo sharaf badan, oo ay ka mid 10 Grammys, American Music Awards 16, qiimaha 11 Country Music Association, qiimaha 8 Academy of Country Music, boor Music Awards 34 iyo 1 hay'adda nabadsugida Award. Sida heesaha sheekada waxaa lagu sharfay Ururka Nashville Songwriters Association iyo Songwriters Hall of Fame.
Bilowga sanadka 2015 40 Swift ayaa iibiyey in ka badan hal milyan oo albums 130 million nuqulo soo bixi iyo 5 ahaa mid ka mid ah fanaaniinta la iibka ugu sarreeya dunida oo dhan digital. Mid kasta oo ka mid ah muusikada studio 5 oo uu sii daayay Swift ayaa iibiyey nuqulada 4 million ee Maraykanka ah:Taylor Swift(5,5 MIL),cabsi la'aan(6,9 MIL),Hadda hadal(4,5 MIL),Red(4,1 mil) iyo1989(4 MIL)
Wixii macluumaad dheeraad ah, fiiri sawirka sawirka Taylor Swift.
Muuqaal Xilliyeed: Ururinta Ciidda Taylor Swift(2007)
Isku xir xir
iTunes Live ka SoHo
Hadal hadda: World Tour Live
Ciyaaraha Gaajada: Taylor Swift & Warsidaha Dagaalka - Badbaadada iyo Dhaqanka(2011)
Ciyaaraha Gaajada: Taylor Swift - Indhuhu Furan(2011)
Marwo Carabta: Taylor Swift - Enchanted
Muxaadaro Munaasibad Lagu Taageerayo Taylor Swift -
2009 Jonas Brothers: Concert 3D Sam isaga naftiisa Doorarka yaryar
Dambiga Las Vegas Haley Jones Qeybta "Laabashada, Jeedsada, Leexo"
Hannah Montana: Filinka Sam isaga naftiisa Doorarka yaryar
Saturday Night Live Sam isaga naftiisa Loop / Martida Muusikada
2010 Maalinta Jacaylka Felicia Actor ugu horeysay ee filimka
2012 Dr. Seuss 'The Lorax Audrey Taylor Taylor ayaa la hadlay
2014 Sheyga Rosemary Dabeecadda dhinaca
1: Sawir-qaadashada Taylor Swift
2: Cabsi la'aan (album, Taylor Swift)
4: Casaan (albaab, Taylor Swift)
5: Taylor Swift (Albüm)
9: Laga bilaabo bisha Diseembar
10: MTV Europe Abaalmarinta Music Music 2012
12: Maxad Martin
13: Albamka muuqda
14: Hadal Hadal
16: Abaalmarinta Billboard Music
17: Cabsi la'aan
18: Kuleylka Dabaysha
19: Mudanayaal Kaliya (Ku Dheg Naarta)
20: Abaalmarinta Xulashada Dhalinyarada 2012
21: Abaalmarinta Muusikada Mareykanka 2015
25: Abaalmarinta Xulashada Dhalinyarada 2011
27: 25. Abaalmarinta Doorashada Nickelodeon Kids
29: MTV Europe Abaalmarinta Music Music 2017
30: Diiwaanka Jamhuuriyadda
31: 26. Abaalmarinta Doorashada Nickelodeon Kids
33: Abaalmarinta Xulashada Dhalinyarada 2013
34: 23. Abaalmarinta Doorashada Nickelodeon Kids
37: 24. Abaalmarinta Doorashada Nickelodeon Kids
38: Hotline 100
43: 39. Abaalmarinta Xulashada Dadka
44: Rajada Haiti Hadda
46: MTV Europe Abaalmarinta Music Music 2013
48: Shan subag oo mugdi ah (filim)
49: Hannah Montana: Filinka (heesaha)
Taylor Alison Swift (* 13 December 1989.) Waa gabayaa American, Xisbi iyo laxamiistaha. Waxay ku koray Wyomissing, Pennsylvania, waxayna u guurtay Nashville, Tennessee, halkaasoo ay bilawday mihnadkeeda muusikada oo ah fanaan caan ah. Waxay qandaraas la gashay shirkad madax bannaan oo ah "Big Machine Records" waxayna noqotay qoraaga ugu da'da yar ee abid ugu shaqeeya Sony / ATV Music Publishing. Horeba ka dib markii la sii daayo horeysay album is-cinwaankeedu yahay (Taylor Swift) ee 2006 uu noqday xiddig ee dalka music. saddexaad hal "Our Song" The iyada sameeyey oo gabayaa ahaa kii ugu yaraa, kuwaas oo ay fadeexadi ku qoray oo soo saaray hees, taas oo marka hore kaalinta ee Songs boor Hot Country. Waxay heshay Magaca Award ee Grammy Award loogu talagalay Artist Best Actor ee 2008.
Tani waa discography sanadka Fanaanada American Taylor Swift.Do 2013 26 adduunka iibiyey in ka badan hal milyan oo albums. In Maraykanka, iibin 22 million albums oo diiwaan 51,1 million iibka digital ee albums iyo písní.AlbaStudiová albaKoncertní albaExtended playVideo alba2009: CMT Crossroads: Taylor Swift iyo Def Leppard2011: Taylor Swift: Journey in songs FearlessSinglySolo singlyDuetyPropagační singlyDalší hitparádáchPísně oo waxaa la geeyaa qiimeynta bilaha ah boor Hot 100, laakiin waxa aan ahaa singly.Fearless: "Jidka ayaan Jeceshahay in aad" (tareenka 72.), "weligaaba & Markasta" (34.) "u bood Markaas dhaca" (10.) "lama taabtaan" "Kaalay (19.) in la Roob ah "(30.)" Xiddiga "(26.)" dhinaca kale ee Door oo dhan "(22.) hadal Hadda" Gacaliye John "(Risaalo 54.)" Marna Grow Up "(84)." sixray "(75.)" Better badan aargoodigu "(56)." Innocent "(27.)" dabataagan "(63.)" Kiss Dambe "(71.)" Long Live "(85.)" Haddii Tani waxa ay ahayd a movie "(. 10)" Superman "(26.) Red:" waxaan Ku dhawaad ​​Ma "(. 65)" All Too Well "(. 80)" joog Joog joog "(91)." Markii aan Ogaa '(64).
Cabsi la'aan waa heestii studio labaad by Fanaanada dalka-pop American Taylor Swift. 11 ayaa la sii daayay. Nofeembar 2008 diiwaanka Big Machine. album The soo baxay on boor Maraykanka 200, 592 304 iibin nuqul ee isbuucii ugu horeysay oo waxay noqdeen album ugu iibinta ee heesaa dumar ah ee isbuucii ugu horeysay 2008. CD cabsi la'aan sida ugu horeeyay awood ku in ay ka gudbaan marinka 1 000 000 koobi iibiyo 2009, 1 500 000 ka nuqulo 1 iibiyey. Janaayo. album wuxuu lahaa afar hits in 10 Top ah - "Change" (. 10) "Love Story" (. 4) "Fearless" (9.) Markaasaa "Waxaad ii sugnaan Iyadoo" (2.). album ayaa sidoo kale wuxuu lahaa lix hits in 20 Top ah, si ay kor ugu biiray "Waxaad Ma tahay Sorry" (11.) Markaasaa "White Horse" (13.). The hal keentay si rasmi ah u noqday hit ugu weyn ee mustaqbalkiisa Swift ee, iyadoo la isticmaalayo guul gudaha iyo caalamka oo dhan. Albaanku wuxuu ku jiray liiska kow iyo toban toddobaad ee liiska Billboard 200.
1989 ayaa ah muusigga shanaad ee loo yaqaan 'studio' oo ah tiknoolajiga ugu caansan dalka Mareykanka Taylor Swift oo sii daayay 27. Oktoobar 2014. Tani waa gabowgii ugu horreeyay ee madow, oo lagu soo koobay muusikada fanka ee siddeedda qarnigii la soo dhaafay. Maqaalkani wuxuu soo gabagabeynayaa isbedelka fannaaniinta dalka, kaasoo horayba u bilaabay qaar ka mid ah hitskii hore ee "Red" ee sanamkii pop. Isbedelka qaabka waxaa lagu sharraxay midka ugu horeeyay ee albaabka "Shake It Off", kaas oo la soo bandhigay markii la daabacayay macluumaadka ku saabsan xNUMX ee albaabka. 18, oo laga soo tabiyay toddobaadka soo socda ee sare ee shaxda Billboard Hot 2014.
Red waa albaabka afaraad ee tikidhada Taylor Swift. Albaabka waxaa lagu duubay Diiwaanka Big Machine waxaana sii daayay 22. Oktoobar 2012. Albaanku wuxuu ka yimaadaa kelmado "Waxaan waligeen waligood dib u soo celineynin" iyo "Bilaw".
Taylor Swift waa albaabka ugu horeeya ee isla dhawaaqa. album ayaa la sii daayay 24. October 2006.Seznam song Tim McGraw - 3: 54Picture in Guba - 2: 57Teardrops on My Gitaarka - 3: 37 Place ee World Tani - 3: 24Cold sida Waxaad - 4: 03The baxsan - 3: wada jir ah ula Smile a 31Tied - 4: 13Stay Beautiful - 4: 00Mary ee Song (Oh My My My) - 4: 06Should've Siciid No - 3: 37Our Song - 3: 24Deluxe ediceTim McGraw - 3: 54Picture in Guba - 2: 57Teardrops on My Gitaarka - 3: 37 Place ee World Tani - 3: 24Cold sida Waxaad - 4: 03The baxsan - 3: wada jir ah ula Smile a 31Tied - 4: 13Stay Beautiful - 4: 00Mary ee Song (Oh My My My) - 4: 06Should've Siciid No - 3: 37Our Song - 3: 24I'm ii Kaliya marka waxaan aad la hubaa - 3: 35Invisible - 3: 25 Heart Dhammaataan Good - 3: 42
Heerka waa gabaygii lixaad ee muusiga Taylor Swift. Waxaa lagu daabacay 10. Nofeembar sanadka 2017. Siidaynta xiritaanka albaabka waxaa lagu dhawaaqay 23. Bishii Agoosto ee sannadkii, markii baakadeeda la daabacay. Tani waa tan ugu horeysay tan iyo markii 2014, markii 1989 la sii daayay. Ilaa waqtigaa, albumyadeeda waxay ku saleysneyd laba sano oo fasax ah. Ed Sheeran iyo riwaayad mustaqbalka ayaa lagu soo bandhigay duubista Taylor Swift's "End Game".
erayga Swift (in English ka dhigan tahay si dhakhso ah, fudutahay, dhiifoon) yeelan karaan dhowr macne: Dadka Swift - heesaa American iyo xubin ka mid ah D12David Swift (* 1933) - British herecJonathan Swift (1667-1745) - spisovatelLewis Irish A. Swift (1820-1913 ) - American astronomEdward D. Swift (* 1871) - astronomer American, ina LA SwiftaTodd Swift (* 1966) - Canadian básníkTaylor Swift - American zpěvačkaDalší isticmaali Swift - bulshada isku xidhka caalamka oo dhaqaale komunikaciSwift (bohol on Deimos) Swift (bohol on Moon ah) Swift (af barnaamijyada) - luqad barnaamijyada ay soo saareen AppleSWIFT (nidaamka qiyaas) - nidaam macluumaadka iyo qiyaas advertising in saldhigyada metro for track ka dhanka ah madal, la joojiyay in January 2008Swift (browser web) - browser web for Windows-ku salaysan WebKituSuzuki Swift - nooca shakhsi automobiluOperace Swift - talaabo military intii lagu jiray dagaalka ietnamuSupermarine Swift - dayuuradaha dagaalka British 50 qeybtii hore. sano 20. qarnigii
"Mine" waa hees ay heesaha u heestaan ​​dalka Mareykanka ee loo yaqaano Taylor Swift. Sheekadu waxay ka timid sheekada saddexaad ee loo yaqaan 'Speak Now'. Waxsoosaarka waxaa ka mid ah Nathan Chapman iyo Taylor Swift.
"Back to December" waa sheeko ay heesaa heesaa-hees wadani ah-heesta qoraalka Taylor Swift. Sheekadu waxay ka timid sheekada saddexaad ee loo yaqaan 'Speak Now'. Waxsoosaarka waxaa ka mid ah Nathan Chapman iyo Taylor Swift.
MTV EMA 2012 (oo loo yaqaan 'MTV Europe Music Awards') ayaa qabtay 11. November 2012 ee Frankfurt, Germany, iyo taageeraha fiidkii wuxuu ahaa Heidi Klum. Waxay ahayd markii shanaad EMA oo martigelisay Jarmalka, markii labaadna magaalada marti galisay Frankfurt. On 17. Sebtembar 2012, ayaa la soo daabacay. Rihanna ayaa la siiyay lix magac, halka Taylor Swift ay heshay shan magacood.
Taylor Lautner (* 11 1992. February, Grand Rapids, Michigan, United States) waa jilaa American waa kan ugu caansan doorka reer Yacquub Black in filimka taxanaha Stmívání.Osobní životNarodil Debooraah iyo Daniel Lautnerovým. Markuu ahaa 6 sanado badan, wuxuu bilaabay inuu isku darsado inuu karatee. Horeba 8 wuxuu u matalay waddankiisa wuxuuna ku guuleystay saddex biladood oo dahab ah. Karate waxay daraasad ku sameysay dugsiga france ee Fabian. Kadibna Mike Chat ayaa u tababaray.
Max Martin, magaca dhalashada Martin Karl Sandberg (* 26 1971. February, Stockholm) waa laxamiistaha Sweden oo muusiko ah oo caan ah, soo saare music iyo heesaa. Qoray hits for Boys kvaksalver ah (I Waxay doonaysaa Jidka Taasi), Britney Spears (... Baby One Time More), Bon Jovi (Waa My Life), Katy Perry (I dhunkaday Girl a), Avril Lavigne (Maxaa Jahannamo ah, Dhoola caddee, Rajadeyda waxaad ahaydeen Halkan), Pink (Sidaas maxay) Maroon 5 (One Night More), Taylor Swift (Waxaan Ma Marna Ever Helitaanka Back Wadajir, jaf Waxaa Off, Space Blank, dhiigga Bad), Westlife, Celine Dion, Kelly Clarkson, Christina Aguilera, Veronicas The, Jennifer Lopez, Ellie Goulding, Adele iyo 'N nidaameed. Wuxuu lahaa heeso 22 on Billboard Hot 100. Waxa uu ku guuleystay seddex Grammy Awards (2015 - soosaare ka mid ah, sannadka 2016 - fiican album pop iyo album ee sannadka, labada kiis ee album ah 1989 ka Taylor Swift).
Albaabka aan magaca qarsooneyn (sidoo kale albaabka magaca isku midka ah) waa dhageysiga muusikada ee farshaxanka oo magaciisu yahay magaca kooxdan ama magaca muusiga. Badanaa waxa uu yahay kan ugu horreeya ee loogu yeero albaabka. Tusaale ka mid ah album qarsoodi ah oo aan markii hore la sii deyn ayaa ah Genesis Genesis, tusaale ahaan; taasi waxay ahayd albaabadooda fasalka 12aad.
Hadalka Hore waa albaabka saddexaad ee heesaha dalka Mareykanka iyo leytiis Taylor Swift. 25 ayaa la sii daayay. Oktoobar 2010 by Records Big Machine. Albaabka waxaa laga diyaariyay 2008 ilaa 2010 la Swift iyo Nathan Chapman. Dhammaan heesaha albaabka waxaa lagu qoray qoraaga kaliya. Albaanku wuxuu ka kooban yahay qaabka fanka iyo lyrical theme for jacaylka, jacaylka iyo wadnaha jabsan. Gabaygu wuxuu u heestaa noloshii heesaha, heesaha ayaa qeexaya waayo-aragnimadeeda.
Abaalmarinta Billboard Music Music Awards ee 2015. May 17 ee MGM Grand Garden Arena ee Las Vegas. Munaasabadda waxaa baahiyay ABC. Moderators ayaa la wareegay Ludacris iyo Chrissy Teigen.
Abaalmarinta Billboard Music waa abaalmarin ay bixisay Billboard magazine ee muusikada muusikada Mareykanka. Qiimayaasha waxaa laga soo qaatay 1989 ilaa 2007. Haddaba mar labaad ayay bilaabeen inay noqotay 2011.ProcesNa duwan ah qiimaha Grammy, taas oo loo go'aamiyo magacaabista sidii ay tirada codadka ka soo Academy Qaranka ee Recording Arts iyo Sciences, waxaa u sharaxan Music boor ka Awards ku salaysan yihiin qiimeynta, downloads iyo playability guud ahaan raadiyaha.
Cabsi la'aan noqon karaan: cabsi la'aan (album, Taylor Swift) - album ah oo gabayaa Taylor Swift ka 2008Fearless (album, Family) - album Qoyska ee sannadka 1971Fearless Records - Publishing Music American
Burnin 'Up Tour waa booqashda shanaad ee Jonas Brothers. Booqashadan waxaa loogu talagalay in ay taageerto saddexdooda album A Little Bit Longer. safar Tani waxay sidoo kale ka Disney movie asalka, Camp Rock, halkaas oo Brothers Jonas u ciyaaray lahaa taageero. Safarka waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu taageero Demi Lovato muusikada. Socdaalku wuxuu bilaabmay 4. July 2008. film riwaayad 3D cinwaankeedu Jonas Brothers: 3D Experience Concert ayaa yimid 27. Febraayo 2009. Albaabka 24 waxaa la sii daayay. Febraayo 2009. Avril Lavigne, Demi Lovato, Veronicas The, Robert Schwartzman ee band Rooney iyo xidiga dalka Taylor Swift oofiyo sida fanaaniin booqasho dhowr jeer oo bilaabay Honor Society iyo sida martida ah ee Puerto Rico 22. Maarso 2009. Taylor Swift oofiyey song "Haddii dhahnaa Said No," beydkiisa la Brothers Jonas ah. Wadarta jamacada waxay ku baxday 41 Milyan Dollar, waxqabadka 48.
Single Ladies (Put iyo Ring on It) waa hees by heesaha American Beyoncé Knowles ka soo albumkeeda saddexaad, Waxaan ahay ... Sasha Fierce. Sheekada waxaa sii daayay 12. Oktoobar 2008 oo ah hal tijaabo oo keliya. Producer The-Dream wuxuu bilaabay inuu sameeyo hees ka dib arooska qarsoodi ah ee Beyoncé iyo ninkeeda Jay-Z bishii April 2008. Soo-saaraha ayaa ku dhiirrigeliyay dhibaatooyinka ragga aan jeclayn guurka. Gabaygu wuxuu mar dambe u sheegay Billboard in ay jeceshahay mawduuca gabay maxaa yeelay waa dhibaato in haween badani xaliyaan maalin kasta.
Abaalmarinta Xulashada Dhalinyarada 2012 waxaa bixiyay 22. July 2012 oo laga sii daayo kanaalka Fox TV. Moderator sannadkan ayaa noqday Demi Lovato iyo Kevin McHale. Abaalmarinta ayaa u dabaaldegtay guulihii ugu fiicnaa ee sannadkii la soo dhaafay ee muusikada, filimka, telefishanka, isboortiska, fashion, majaajilada iyo internetka. Abaalmarinta waxaa loo doortey dhalinyarada da'doodu tahay 13 ilaa iyo 19 jir. Sannadkan waxaa lagu diiwaan geliyay codad ka badan 134.
Abaalmarinta 2015 Music Music wuxuu ka dhacay 22. Nofeembar 2015 ee Tiyaatarka Microsoft ee Los Angeles, California .Ciyaartan waxaa laga sii daayey ABC waxaana u dhaxeeyay Jennifer Lopez.
Muusikada dalka ayaa ah qaabka muusiga ah ee Maraykanku, bilowga taariikhda dib u celinta dhammaadka 18. qarnigii. 20 1920-kii ayaa ahaa kan ugu horreeya. qarnigii. Waxa si weyn u saameeyey muusikada Isbaanishka, Faransiiska iyo Irish.
Magaca iyo magaca qoyska Taylor [tejlr] ama Tylor ayaa dad badan: Alan Taylor (1959) - Agaasimaha filimka American, soo saare iyo scenáristaAngelo Taylor (1979) - Orodyahanka American, orodada, Olympic vítězArt Taylor (1929-1995) - jazz American bubeníkBilly Taylor (1921-2010) - biyaaniiste jazz American iyo skladatelBrenda Taylor (přechýleně Brenda Taylor) - more osobCecil Taylor (1929) - biyaaniiste American iyo skladatelCreed Taylor (1929) - music American producentDallas Taylor (1948-2014) - US hudebníkDon Taylor (1920 -1928) - filimka American režisérBrian Shaw-Taylor (1915-1999) - baabuur Irish závodníkBrook Taylor (1685-1731) - xisaab Ingiriisi iyo vědecCorey Taylor (1973) - Fanaanada American iyo hudebníkDallas Taylor (1948) - US bubeníkDave Taylor (1955) - hockey Canadian útočníkEdward Burnett Tylor (1832-1917) - ANTR dhaqanka British opologElizabeth Taylor (1932-2011) - American herečkaFrederick Winslow Taylor (1856-1915) - Makiinado inženýrGene Taylor (1952) - US pianistaHenry Taylor (1885-1951) - swimmer British, Olympic vítězHound Dog Taylor (1915-1975) - blues American guitarist iyo zpěvákCharles Taylor (Faylasuuf) (1931) - Canadian siyaasadeed filosofCharles Taylor (siyaasi) (1948) - Madaxweynihii hore ee LibérieChip Taylor (1940) - Fanaanada American iyo hudebníkChris Taylor - more osobChristian Taylor (1990) - Orodyahanka American, trojskokanJames Taylor (* 1948 ) - Fanaanada American iyo kytaristaJennifer Bini Taylor (* 1972) - American herečkaJoseph Hooton Taylor (* 1941) - radioastronomJoseph US Lyle Taylor (* 1964) - US herecKarl Taylor Compton (1887-1954) - US fyzikKathrine Kressmann Taylor (1903-1996) - American spisovatelkaKenneth Taylor (1917-2005) - fiqi American iyo spisovatelKoko Taylor (XN UMX-1928) - American zpěvačkaLarry Taylor (* 2009) - walaalkiis American bassist Mel TayloraLili Taylor (* 1942) - American herečkaMargaret Taylor (1967-1788) - dhaxday Madaxweynaha Zachary TayloraMel Taylor (1852-1933) - muusikiiste American, walaalkiis ah Larry TayloraMeshach Taylor (1996-1947) - US herecMick Taylor (* 2014) - Ingiriisi hudebníkMike Taylor (paleontologist) (1949) - barnaamijyada computer British iyo paleontologMorgan Taylor (1968-1903) - Orodyahanka American, Olympic vítězOtis Taylor (* 1975) - blues American muusikiiste
Red ama Red ayaa tilmaamaya laga yaabaa in Red (webiga) - cas řekaRED - Random Early Ogaanshaha - random hore detekceRed (biirka) - Lithuanian pivoFilmyRed (film 1970) - film ka 1970 (Gilles Carle) Cas (film 2002) - film sano 2002 (Ram Sathya) Cas (film, 2008) - movie ee sannadka 2008 (Trygve Allister Diesen iyo Lucky McKee) Cas (film, 2010) - movie ee sannadka 2010 (Robert Schwentke) HudbaRed (album, King casaanka) - album music band British King CrimsonRed (album, Taylor Swift) - album music ah oo gabayaa Taylor SwiftRed (Makaad) - American music Christian skupinaLiteraturaReD - Czech avant-garde časopisExterní links
Abaalmarinta Xulashada Dhalinyarada 2011 waxaa bixiyay 7. Agoosto 2011 waxaanu ku noolyahay kanaalka Fox TV. Sanadkaan gudoomiyuhu wuxuu ahaa Kaley Cuoco. Tani waa markii ugu horeysay ee qiimahaas lagu baahiyo tan iyo 2007.
Ryan Benjamin Tedder (* 26. 1979 June) waa laxamiistaha Maraykan ah oo producent.Je yaqaan oo gabayaa ahaa hogaanka of guutadii dhagax weyn pop American OneRepublic, sidoo kale gacan saar la leeyihiin fannaaniinta badan sida Madonna, U2, Adele, Beyoncé Knowles, Birdy, Maroon 5, Demi Lovato, Ellie Goulding, Bob, Ariana Grande, Kelly Clarkson, K'naan, Carrie Underwood, Jennifer Lopez, Jordin Sparks, Leona Lewis, Gavin DeGraw, Sebastian Ingrosso, Heroes Gym Class, One Direction, James Blunt, Taylor Swift, Gwen Stefani, Far East Movement, Paul Oakenfold, iyo Ella Henderson, Zedd, Selena Gomez, Alesso, David Guetta.
Abaalmarinta Doorashada Kooban ee Nickelodeon Kids ayaa ka dhacday 31. March 2012 ee Xarunta Galen ee Los Angeles. Munaasabada waxaa u xilsaaray Will Smith. Fiidnimadii, fannaanka Katy Perry iyo One Direction ayaa sameeyay.
Abaalmarinta Billboard Music Music Awards ee 2016. May 22 oo ku yaala garoonkii T-Mobile ee Las Vegas. Munaasabadda waxaa baahiyay ABC. Moderators ayaa la wareegay Ludacris iyo Ciara, waxaana loo magacaabay 2016. Abriil 11. Isbuucaan wuxuu helay magaca ugu sareeya iyo 2016. Britney Spears waxay heshay Billboard Millennium Award. Celine Dion wuxuu ku guuleystay Billboard Icon Award.
MTV EMA 2017 (oo loo yaqaan 'MTV Europe Music Awards') ayaa lagu qabtay 12. November 2017 ee Wembley Hall ee London, UK. Boqortooyada Ingiriiska waxay martigalisay abaalmarinta lixaad, iyo labaadna London.
Diiwaanka Jamhuuriyada waa shirkad daabacaad muusikada Muuqaalka ah oo Maraykanku leeyahay oo ah Universal Music Group. Label waxaa aasaasay Monte Lipman iyo Avery Lipman ee 1995. 1999, calaamaddu waxay noqotay qayb ka mid ah Kooxda Jamhuuriga ah ee Universal Motown. Ka dib markii la sii daayay Diiwaanka Motown, calaamadee Diiwaanka Jamhuuriyada ayaa la joojiyay wakhti gaaban. 2006 wuxuu ku noqday Diiwaanka Jamhuuriyadda Universal isla markaana 2012 waxaa loo soo nooleeyey Diiwaanka Jamhuuriyadda.
Abaalmarinta Doorashada Kooban ee Nickelodeon Kids ayaa ka dhacday 23. March 2013 ee Xarunta Galen ee Los Angeles. Xidigga habeenkii ayaa ahaa jilaa Josh Duhamel. Rapper Pitbull waxaa lagu soo bandhigay heesaha Christina Aguilera iyo Kesha fiidkii. Codbixinta internetka waxay bilawday 14. Febraayo 2013.
John Krovoza waa lamaane Maraykan ah. In sano ee 1994 in 1997 muuqday la muusikiiste Greek Yannim. 2006 wuxuu ku ciyaaray dalxiis Dixie Chicks. Intii lagu guda jiray xirfadiisa ciyaareed uu la kaashanaya muusiikaystayaal kale oo badan oo noocyo kala duwan, oo ay ku jiraan Ray Charles, Taylor Swift, John Cale, Christina Aguilera, Kanye West, Barry Manilow, Rusty Anderson iyo guutadii Black Light Burns iyo Belle iyo Sebastian. Sidoo kale waa xubin ka mid ah afar maalmood String ah Vitamin String afar maalmood, oo ku takhasusay songs oo muusikiiste ah ayaa dhagaxayga weyn iyo pop kala duwan sida Nirvana, Albaabada iyo dhinto The.
Teen Choice Awards qabtay 2013 11. August 2013 waxaana la baahiyey idaacadda American Fox. Qaayaha ahaayeen dad ka beerihii music, filimka, telefishinka, sports, fashion iyo Internetka, daawadayaasha da'da yar ee ka 13 in 19 sano. Tani waxa ay ahayd Teen la soo dhaafay la isugu gudbiyo Choice Awards qabtay Gibson Amphitheatre ah, oo tan iyo 2013 September lagu qaban on Wizarding Adduunka ee Harry Potter (Afar gool dhaliye Adduunka ee Harry Potter). The Saga Twilight: Breaking Dawn - 2. Part badisay sideed ka mid ah sagaalkii magacaabidda, Pretty Beenaalayaal Little oo dhan ka mid ah todobadii magacaabidda guuleystay, filimka Pitch Perfect! zíslal afar ka mid ah kow iyo magacaabidda, taxanaha kibirsan badisay afar abaalmarinta, iyo sidoo kale Bruno Mars badisay labo ka mid ah sideedii magacaabidda, Taylor Swift ayaa badisay labo ka mid ah todobadii magacaabidda ay, Demi Lovato badisay afar abaalmarinta, One Direction ku guuleysatay dhamaan lixdii abaalmarinta (oo ay ku jiraan ku qiimaysaa of Styles Harry abaalmarinta uu. helay iyo Selena Gomez iyo Miley Cyrus, iyo saddex ka mid ah lix magacaabidda.
Abaalmarinta Doorashada Kooban ee Nickelodeon Kids ayaa ka dhacday 27. March 2010 ee Pauley Pavilion ee Los Angeles. Jilaaga Kevin James ayaa ahaa mid dhexdhexaad ah. Fiidkii, Miranda Cosgrove, Rihanna iyo Justin Bieber ayaa u muuqday.
Owen Pallett, magaca dhalashada Michael James Owen Pallett (* 7 September 1979) waa muusikada Canadianka ah, farshaxanno badan iyo muusikada. Wuxuu u heelan jiray muusiga tan iyo carruurnimada; wuxuu bilaabay inuu ciyaaro qalin-jebinta da'da saddex jir wuxuuna ka kooban yahay hal-abuurkiisii ​​koowaad ee toban-jirka. Later waxa uu ku soo biiray isagoo ku biiray Haggis iyo Picastro, iyo 2005 wuxuu sii daayay albaabadiisa ugu horeeyay, Hooyo iyo Guri Fiican (oo uu cinwaankiisu ahaa Fantasy Final Fantasy). Inta lagu jiro xirfaddiisa, wuxuu la shaqeeyay muyuusikooyin kale, sida Taylor Swift ama Linkin Park, National iyo Arcade Fire. 2010 ayaa lagu guuleystay abaalmarinta musharaxa muusikada ee Polaris. 2014, waxaa loo magacaabay Oscar for Best Song for Her.
Megan Nicole Flores, oo loo yaqaan Megan Nicole (* 1 1993. September, Katy, Texas, USA) waa gabayaa-Xisbi American, Atariishada iyo model, kuwaas oo soo baxay on YouTube in 2009.Raný životNarodila ee Houston, Texas. waalidkeed waxaa la odhan jiray Frankie iyo Tammy Flores oo uu leeyahay mid ka mid ah walaashiis Maddie Taylor. Waxay ku koray Katy, Texas, iyo xiiseynayo music tan iyo markii uu ahaa toban sano jir markii aabbeheed iibsaday karaoke. Inta lagu jiro dugsiga sare waxay sidoo kale qayb ka ahayd dhismaha kaniisadda.
Abaalmarinta Doorashada Kooban ee Nickelodeon Kids ayaa ka dhacday 2. April 2011 Xarunta Galen ee Los Angeles. Jack Black ayaa qaatay dhexdhexaadinta markii saddexaad. Fiidkii, Wakhtiga Big Time Rush iyo Biyaha Madow ee Biyaha ah iyo heesaha Willow Smith ayaa sameeyay.
Billboard Hot 100 waa shaxanka ugu caamsan ee sharafta leh ee Maraykanka. Hitparade waxaa la sameeyaa toddobaad kasta tan iyo 1941. Gabaygii ugu horeeyay ee 100 # 1 wuxuu ahaa heeska "Dhibicid yar" oo ay Ricky Nelson ka soo jeedaan 4. Agoosto, 1958.HistoryWhich waxaa hadda loo yaqaan Hot 100, waxaa jirey shan iyo toban sano ka hor qaabab kala duwan. 1940kii iyo 1950-meeyadii, heeso caan ah ayaa lagu tuuray sadex shax oo waaweyn.
Edward Christopher Sheeran (* 17. 1991 February) waa gabayaa Ingiriisi ah iyo Xisbi, xidid Irish. Ka dib markii carruurnimo qaatay in Framlinghamu ee England sannaddii 2008 dhaqaaqay London si ay diiradda saaraan badan oo ku saabsan mustaqbalkiisa ciyaareed music. In 2009 312 uu ciyaaray riwaayada iyo bilowga sanadka 2011 sii daayay No. madax banaan EP magacaabay Mashruuca Iskaashatooyinka 5, oo ay ugu mahadcelinayaan Diiwaanka Asylum / Atlantic Records. Waxa uu helay fiiro gaar ah la kali "Kooxda A The", "Lego House" iyo "waan Arag Fire". Daawadiisii ​​ugu horeysay + waxaa lagu sii daayay 2011 wuxuuna ku guuleystay abaalmarinta platinum ee UK. In 2012 uu ku guuleystay labada abaal hay'adda nabadsugida Awards, waayo fiican fanaanada British Solo iyo xiddiga sannadka, halka song ah "The Kooxda A" ku guuleystay abaalmarinta Novello Ivor ee ugu fiican song, marka la eego muusikada iyo qoraalka. 2014, gaar ahaan 23. 6., Wuxuu sii daayay albaabkiisa labaad ee loogu yeero ×, hees Sing Sing. In sawir 2015 ayuu ka abuuray song in uu yahay oo dhan videos Ed ee, ka ilmaha aad goob joog ka.
Serayah Ranee McNeill (* 20 June 1995, Encinitas, Kaliforniya, Maraykanka) waa actress Ameerika, heesaha iyo qaabka. Inta badan waxaa loo yaqaanaa doorka Tianna Brown ee taxanaha Boqortooyada.
Joey Lynn King (* 30 July July 1999, Los Angeles, Kaliforniya, Mareykanka) waa actor Maraykan ah. Waxay ku ciyaartay Ramona iyo Beezus (2010), Crazy, Damn Love (2011), 2017.
Ronan waa magac lab siiyey asal Celtic taasoo la micno ah shaabadda yar. erayga Irish qayib Ron, taas oo lagu daray galaha sidayna án.Známí Ronan of Locronan, ee 6 weli ku Irish. stoletíRonan Bennett, Irish spisovatelRonan Carolino Falcao, Ecuador fotbalistaRonan Farrow, qoraaga American ah oo aktivistaRonan Finn, Irish fotbalistaRonan Hardiman, Irish skladatelRonan Keane, Irish soudceRonan Keating, Irish zpěvákRonan Keenan, South African spisovatelRonan Lee, Australian politikRonan Mac Aodha Bhuí, Irish hlasatelRónán Mac Colmáin, Irish králRónán Mullen, Irish politikRonan O'Brien, Irish spisovatelRonan O'Gara, rugbistaRonan Irish ah O'Rahilly, an Irish obchodníkRonan Pensec, Faransiis cyklistaRonan Queiroz Brazil fotbalistaRonan Rafferty, Irish golfistaRonan Sheehan, Irish spisovatelRonan Thompson, American ah oo u dhintay cudurka kansarka iyo neuroblastoma mawduuca of song "Ronan" ka Taylor SwiftRonan Tynan, xukunka Irish iyo paralympionikRonan sida a la odhan Colin Ronan, astronomer British iyo spisovatelDaniel Ronan, Ronan politikNiall American, Irish rugbistaSaoirse Ronan, Irish herečkaReferenceMiloslava Knapp, sida loo Bu magaca ilmaha de? Links Dibadda
Abaalmarinta Xulashada Dadka ayaa lagu qabtay 9. January 2013 ee Tiyaatarka Nokia ee Los Angeles, California. Gudbinta gudbinta waxaa soo gudbiyey CBS iyo Xbox Live. Munaasabada waxaa ku jiray Kaley Cuoco. Nominations ayaa lagu dhawaaqay bishii November ee 2012.
Zach Gilford (* 14 Janaayo 1982, Evanston, Illinois) waa actor Maraykan ah iyo telefishin. Doorashadiisa ugu fiican ee la yaqaan oo ugu guulaystay waa taxanaha, gaar ahaan Matt Saracen doorka jimcaha habeenada Jimcaha iyo Tommy Fuller ee khariidada.
MTV EMA 2013 (oo loo yaqaan 'MTV Europe Music Awards') ayaa lagu qabtay 10. November 2013 ee Ziggo Dome ee Amsterdam, Netherlands. Tani waxay ahayd markii ugu horeysay tan iyo 1997, markii ay sidoo kale ku sugnaayeen Netherlands.
Songwriters Hall of Fame waa Abaalmarinta Muusikada Macaamiisha ah ee ay bixisay National Academy of Music. Waxaa laga aasaasay 1969 Johnny Mercer, iyo daabacayaasha Abe Olman iyo Howie Richmond. Marka laga soo tago qoraayada qaybta ugu muhiimsan, waxaa jira dhowr abaalmarin oo gaar ah, sida abaalmarinta Johnny Mercer, ama Sammy Cahn's Achievement Achievement Award.
Afartan dabeecadood oo mugdi ah (Ingiriisi asalkiisu yahay Afartan Shades of Darker) waa filim riwaayad ah oo ah riwaayad Maraykan ah oo ka soo jeeda 2017. Mowduuca waa magac isku mid ah El James, qoraalka filimka waxaa soo qoray ninkeeda Niall Leonard oo uu hogaaminayey James Foley. Sawirka ayaa ah mid soo noqnoqonaya Abaalmarinta Muuqaalka. Dakota Johnson iyo Jamie Dornan mar kale hogaanka ciyaarta.
Hannah Montana: Filinka ayaa ah cinwaanka heesaha iyo filimada. Qalabkani wuxuu ka kooban yahay heeso 18 ah, qaar ka mid ah kuwan oo ka weyn, ma ahan heeso muusiko Miley Cyrus (Hannah Montana), laakiin qaar kale. Waxaa lagu daabacay 2009.